နိုင်ငံတကာသတင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Thousands of Rohingya Muslims in Myanmar have fled the country, with many taking incredible risks to reach Australia, to avoid religious persecution, Press TV reports.
Myanmar’s government refuses to recognize Rohingya Muslims as citizens and labels the minority of about 800,000 as “illegal” immigrants.
The persecuted minority have faced torture, neglect, and repression in Myanmar since it achieved independence in 1948.
Saeed Kazim,aRohingya Muslim who fled to Australia, told Press TV on Monday, “The Burmese military came and arrested me. They took me toamilitary camp. They really tortured me. They beat me.”
On December 25, the United Nations General Assembly issuedaresolution expressing concern over the persecution of Muslims in Myanmar. The resolution called on Myanmar’s government to “protect all their (Muslims) human rights, including their right toanationality.”
Hundreds of Rohingyas are believed to have been killed and thousands displaced in attacks by the Buddhist extremists. The assaults have been mainly carried out in the western state of Rakhine.
Aung San Suu Kyi, the opposition leader in Myanmar, has come under fire for her stance on the ethnic violence. The Nobel Peace laureate has refused to censure Myanmar’s military for its persecution of the Rohingyas.
Rohingya Muslims are said to be descendants of Persian, Turkish, Bengali, and Pathan origins, who immigrated to Myanmar as early as the 8th century.
This entry was posted on July 28, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.
မေလ-၂၀၁၃ , ရေးသူ- ဦးအောင်ထူး (ရှေ့နေ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခများအား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁)
ဒီမိုကရေစီကို အသွင်ကူးပြောင်းနေသည်ဟု ကြွေးကြော်ဖေါ်ဆောင်နေသောဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင်တိုင်းရင်း သားပြည်နယ်များ၌ စစ်မှန်သည့် ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရန် အလားအလာမတွေ့ရသေး။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ မဖြစ် ပွားသည့် မြေပြန့်ဒေသများမှာပင် အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခများတိုးများလာ၊ နိုင်ငံပြင်ပမှလည်း ဟိုကသည်က ခြိမ်းခြောက် မှု များပေါ်လာလျှက်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကိုထိတ်လန့်ရ၊ ဘာသာရေး အစွန်း ရောက်များကို ကြောက်ရ၊ အကြမ်းဘက်သမားများ၏ အန္တရာယ်ကို သတိထားနေရနှင့် တိုင်းပြည်၏ ဒေသ အမြောက်အများ၌ သာမန် လူထုပေါင်းမြောက်များစွာမှာ ယုန်သူငယ်များ ဘ၀ သို့ကျဆင်းနေရသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ပြိုကျ တော့ မည်လားဟု စိုးရိမ်ရ သည် အထိပင် ယိုင်လဲ ချိနဲ့လာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်း၊ တည်ငြိမ်ကာ အခြေခံလူထု စီးပွား ရေး တိုးတက်မှုရနိုင်ရေးအတွက် “စစ်မှန် သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံများ” ကို တည်ဆောက်ရန်မှာ အရေး တကြီး လိုအပ်ချက် ဖြစ်လာသည်။
“စစ်မှန်သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံများ” ဟူသော စကားလုံးကို သုံးစွဲရခြင်းမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အတု လွှမ်းမိုး သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ကို စကားလုံးအရ သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း ယင်းမှာ မည်သို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိ ကြောင်းကို မည်သည့်အခါကမျှ လူထုကိုရှင်းပြခဲ့ခြင်းမရှိ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ နိုင်ငံတော် အခြေခံမူများ ဟူသော ကဏ္ဍတွင်မူ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ကို စကားလုံးအရ ပင် ထည့်သွင်းမထားတော့။ အကြောင်း မှာ ယင်း၏ အနှစ် သာရများကို တိုင်းပြည်၏ အချုပ်အခြာဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အညီကျင့်သုံး လိုခြင်း မရှိသောကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူ ရပါတော့မည်။
ချုပ်ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ “စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများ” အား လူထုတရပ်လုံး စနစ်တကျ လေ့လာ ခွင့် မရသေးပါ။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ယနေ့အချိန်အထိ ကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟူသည်မှာ နိုင်ငံတကာ စံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး Rule of Law မဟုတ်။ အာဏာပိုင်များက ပြဌာန်းထားသည့် ပြည်တွင်း ဥပဒေ များအတိုင်း စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law အဆင့်တွင်သာ ရှိနေသေးကြောင်းတွေ့ရသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်း၍ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ကာ ယနေ့တိုင်အတည်ပြုကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၅) တွင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရသည်။
“တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံသည် အခွင့်အာဏာများအား ဥပဒေနှင့် အညီကျင့်သုံးသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအောက်တွင် ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံကို တည်ဆောက်သည်။”  ယင်းပြဌာန်းချက်ကို လေ့လာလျှင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံး နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းမှာ မည်ကဲ့သို့သော ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါသနည်း။
“တရုတ်နိုင်ငံသည် Rule by Law နှင့် Rule of Law ကို ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊” ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ ဟုမ်းမြို့၊ စတော့ ဟုမ်းတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ (၈) ရက်နေ့က ကျင်းပ ခဲ့သည့် နီးနှော ဖလှယ်ပွဲ၌ တရုတ်နိုင်ငံ ပီကင်း တက္ကသိုလ် ဥပဒေ ပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ Dr. Gong Renren က ပြောကြားသွား ခဲ့ သည်။ ၄င်း၏ အဆိုအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ စံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဆင့်ကို မသွားနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဤမျှပေါင်းစပ် ကျင့်သုံးခြင်းသည်ပင် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် များစွာ အကျိုးရှိကြောင်း ထင်ရှား သည်။ ဥပဒေစိုး မိုးရေး အခြေခံတွင် ယနေ့ တရုတ်နိုင်ငံ သည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်နိုင်ရုံသာမက နိုးနေ သောနဂါးကြီးအဖြစ် စီးပွားရေးအရ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာ လျှက် ရှိသည်။
Rule of Law နှင့် Rule by Law စကားလုံးနှစ်လုံး၏ ဆက်စပ်မှုနှင့် ကွာခြားမှုကို လေ့လာမိပါက “ဥပဒေစိုးမိုးရေး” ဟူသောစကားလုံးကို လွယ်လင့်တကူ သုံးစွဲ၍ မရနိုင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် နိုင်ငံတကာ စံထားချက် များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဟူသည်ကို လူထုကြီးတရပ်လုံး လေ့လာကာ တတ်နိုင်သမျှ လက်တွေ့ ဖေါ် ဆောင်သင့် သော အချိန်ရောက်ပါပြီ။ စစ်အာဏာရှင်များတည်ဆောက်ထားသည့် ဥပဒေဘောင်  နှင့် ၄င်းတို့ စိတ် ကြိုက်ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများအတိုင်း စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law တို့အား တိုက်ဖျက်သင့်သော အချိန်သို့ ရောက်ပါပြီ။
ဤစာတမ်းငယ်တွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အကျယ်တ၀င့်ရှင်းလင်းပြ မည်တော့ မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် မျက်မှောက်ဖြစ်ပွား နေသော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခများအား ဥပဒေစိုးမိုးရေး ရှုဒေါင့်မှ ထောက်ပြ သုံးသပ်ပါမည်။ ထို့နောက် ယင်းတို့အား စနစ်တကျဖြေရှင်းကာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူထုကြီးတရပ်လုံး ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးမှုတို့ ရနိုင် ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ စံထားချက် လမ်းကြောင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အကျဆုံးအဆိုပြုချက် အချို့ ကို တင်သွင်းဆွေးနွေးသွားပါမည်။
မည်သည့်နိုင်ငံတွင် မဆို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ဥပဒေအားလုံး၏ အချုပ်အခြာ ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ သဘောမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မညီသော တည်ဆဲဥပဒေမှန်သမျှကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရသည်။ နောင်ပြဌာန်းမည့် ဥပဒေများ သည်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ကိုက်ညီရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံကို တည်ဆောက်လိုပါက ဥပဒေအားလုံး၏ အချုပ်အခြာဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ယင်း၏အုတ်မြစ်ကို ချမှတ်ရပါမည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အခြေခံအကျဆုံးမူမှာ ပြစ်မှုကျူး လွန်သူကိုအပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းဥပဒေရှေ့မှောက် တွင် တန်းတူခံစားခွင့်ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ဤမူကို အခြေခံအားဖြင့် ဥပဒေနှင့် နီးစပ်သူတိုင်း သိကြပါသည်။ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့စဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း (ယခုဦးရွှေမန်း) ကိုယ်တိုင်ပင်တိုင်းသိ ပြည်သိ ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အသစ်အဆန်းမဟုတ်သည့် ဤမူ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မည်သို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးအကောင် အထည်ဖေါ်သင့်သည်၊ မည်သည်တို့မှာ အဟန့်အတားဖြစ်နေသည်၊ ဤမူကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် မည်သည့် ဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်း၊ ပြင်ဆင်၊ အသစ်ပြဌာန်းသင့်သည်၊ ဟူသည် တို့နှင့် စပ်လျှဉ်း၍အလေးထားကာ ယခု လွှတ် တော် ဥက္ကဌနေရာတွင် ယူထားသော ဦးရွှေမန်းသည် လွှတ်တော်အတွင်း၌ မည်သည့်အခါကမျှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ သည်ကို မကြားသိရပါ။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဦးဆောင်ရန် ဆိုသည်မှာ ဝေလာဝေးပင်။
ပြစ်မှုကျူး လွန်သူကိုအပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူခံစားခွင့်ရှိရမည်ဟူသည့် မူကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အာမခံရပါ မည်။ မဆန့်ကျင်စေရပါ။ သို့ရာတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှစ၍ အာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ် ခဲ့သည့် သက်တမ်းကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ တာဝန်ရှိမှုကို ဖုံးကွယ်ကာ “မည်သည့် တရားရုံး တွင်မျှ တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိစေရ” ဟူသည်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅ တွင် ပြဌာန်းထား သည်။ ယင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆို ပါပြဌာန်းချက်မျိုးကို ကမ္ဘာပေါ် တွင် တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေများ၌ မည် သည့် နိုင်ငံတွင်မျှ မတွေ့ ရပါ။ ယင်း အပေါ် ဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ယက်မှဆွေးနွေးမှုအား ၂၀၁၃ မေလ (၇) ရက်နေ့တွင် ဘီဘီစီမှအသံ လွှင့်သွား သည်ကို ဤလင့်ခ် တွင် နားဆင်ပါ။
ပုဒ်မ ၄၄၅ ပြဌာန်းချက်သည် လူတိုင်း ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူရေး ဟူသည့် အခြေခံမူကို အဆင့်နှစ်ဆင့်အရ ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိသည်။ ပထမ အဆင့်မှာ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်ဟောင်းများသည်သာ အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ရနေကြသည်။ အခြား သာမန် ပြည်သူများ မခံ စားရပါ။ ဒုတိယအဆင့် မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူခြင်းတူပါက န၀တ၊ နအဖ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသာ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ကို ခံစားကြရသည်။ ၄င်းတို့၏ အမိန့်ပေးမှုအရ သက်ဆိုင်ရာမှုခင်းများ ၌ မြေပြင်တွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ဖေါ် ဆောင်ခဲ့ ကြသည့် အခြားစစ် ခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များ မှာ အဆိုပါ အခွင့်အရေးကို ခံစားခွင့် မရကြပါ။ အချိန်မရွေး တရားစွဲခံရ နိုင်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ သည် ခွဲခြားမှု  ကို အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီကျင့်သုံးထား ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အုတ်မြစ်တချပ် ဖြစ်နေ သည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြစ်မှုကျူး လွန်သူ မည်သူ့ကို မဆို တိတိကျကျ စုံစမ်းရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်ကာ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်း ဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးတည် ဆောက်ရမည်ဟူသောအသံကို လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ ကျယ်လောင်စွာ မကြားရတော့ပါ။ အကျိုး ဆက် အနေဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးပျက်သည့် အခြေအနေကို တပြည်လုံး၌ ကြုံတွေ့နေကြရသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသည် တိုင်းပြည်တွင် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ပန်းခင်းသော လမ်းကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ ပြောင်းပြန်ပင် ၄င်းသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆက် လက် ပျက်သုဉ်းစေ၇န် ငရဲမီးခင်းသော လမ်းကို ဖေါက်ပေးထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်စီးစေခဲ့ရာ၌ မည်သူ့တွင် အမြင့်ဆုံးတာဝန်ရှိသလဲ။
ရခိုင်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ၏အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၈၇ တွင် “နစက သည် ကက (ကြည်း) ၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိနေ ကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ အမိန့်ကိုသာနာခံရပြီး ဒေသ ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်သူများ၏ အမိန့်ကို နာ ခံနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရ ကြောင်း” အတိအလင်း ဖေါ်ပြထား သည်။ ကက (ကြည်း) သည် (ကာ/လုံ) ၏ အဖွဲ့ ၀င်များဖြစ်သော ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နှင့် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ ၏ တိုက်ရိုက်အမိန့် ပေးညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် ရှိသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခများအတွင်း (ကာ/လုံ) က ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကိုရိုက်ချိုး ခဲ့သည့် အဓိက ဖြစ်ရပ်ကြီးနှစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ပေါ်လွင်သည်။ ၄င်းတို့မှာ ၂၀၁၂ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့တွင် တောင်ကုတ်၌ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဆယ်ဦး အသတ်ခံရခြင်းနှင့် ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့ တွင် မောင်းတော၌ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက ရခိုင် လူထုများအပေါ် ပြန်လည်၍ အကြမ်းဘက်မှုများ ပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဆယ်ဦး အသတ်ခံရခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ယခုအချိန်အထိ ဖေါ် ထုတ် အရေးယူခြင်းမပြုပါ။ ထိုနည်းတူ မောင်းတော တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ပြန်လည် အကြမ်းဘက်မှုကို တားဆီး နိုင်ပါ လျှက် အာဏာပိုင်များက ကာကွယ်တားဆီးမှု မပြုခဲ့ပါ။ ယင်းနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၈၂ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
“မောင်းတောဖြစ်စဉ်တွင် ထိုစဉ်က နစက အကြီးအကဲလုပ်သူက ပြတ်သားစွာ ကိုင်တွယ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့မည် ဆိုပါက ယခု ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင်ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ များမှ ဝေဘန် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။”
ပထမ ဖြစ်ရပ်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးမယူသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င် အမြောက်အများယခုအချိန် အထိ အကြိတ်အခဲဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ဖြစ်ရပ်တွင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါလျှက် မကာကွယ်ခဲ့ သဖြင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့်အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြားဒေသများသို့ ပျံ့သွားခဲ့ သောကြောင့် ရခိ်ုင် လူထုများက မကြေမနပ် ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၄င်းအကြိတ်အခဲများ၊ မကြေနပ်မှုများသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးပျက်သုဉ်း ခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏ အကျိုးဆက် အနေဖြင့် ပဋိပက္ခများ ဆက်လက် ကြီးထွားသွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ပေါ်လွင်သော ဖြစ်ရပ်နှစ် ခုလုံး တွင်သာမက ပထမဆုံး စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ကျောက်နီမော် လူသတ်မုဒိန်းမှုတွင် အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ခဲ့သည့် အတွက် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်သုဉ်းရာတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူမှာ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သည့် ဗဟိုအစိုးရဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ၄င်းတို့၏တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မတည်ဆောက်ခဲ့သဖြင့် အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခများ သည် မြန်မာနိုင်ငံ အခြားနေရာ အတော်များများသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ စွပ်စွဲလာမှုကို ကော်မရှင်က ပယ်ချသည် ဟူသည့်အပေါ် သုံးသပ်ချက်
နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ စွပ်စွဲလာမှုကို ပယ်ချကြောင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဝင် ဒေါက်တာ ဒေါ် ရင်ရင်နွယ် က ပြောခဲ့သည်။ ပယ်ချရသည့် အဓိက အကြောင်းမှာ နိုင်ငံတကာ သည် ဘင်္ဂါလီ တဘက်တည်းကိုသာမေးခဲ့ပြီး ရခိုင် လူမျိုးများဘက်ကို မမေးခဲ့သောကြောင့် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် အခြားသူတချို့ကလည်း အလားတူ တုန့်ပြန်ခဲ့ဘူးသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်မူ နိုင်ငံတကာသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဘက်ကိုလည်း မေးသင့်သလောက် မေးမြန်းခဲ့သည်။ အရင်းခံအားဖြင့်မူ ဘက်နှစ်ဘက် ရှုဒေါင့်မှ အဓိက ချဉ်းကပ်ရန် မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ အတွင်း၌ မည်သို့သော အခြေအနေများဖြစ်ပွားသောအခါ နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု ရှုဒေါင့်မှ ချဉ်းကပ် ကိုင် တွယ်သည်ကို ကော်မရှင်အနေဖြင့် လေ့လာသင့်သည်။ ရိုးရိုးပြစ်မှု နှင့် လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက်မှု တို့၏ ဆက်စပ်မှု နှင့် ကွာခြားမှုအပေါ်လည်း ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန်လိုပါသည်။
သာဓက ဆိုပါမည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ အတွင်း၌ ဘာသာရေးအရဖြစ်စေ၊ လူမျိုးရေးအရဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းတခုခု အရဖြစ်စေ လူတဦးက အခြားတဦးကို၊ လူအုပ်စုတခုက အခြားအုပ်စုတခုကို၊ သတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သည် ဆိုကြပါစို့။
လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှကြည့်လျှင် သတ်ဖြတ်ခံရသူ၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင် ခွင့် ရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်စွက်ဘက် ပြောဆိုမည် မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ အချုပ် အခြာအာဏာ အတွင်း ကျရောက်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၄င်းနိုင်ငံ၏ အစိုးရကသာလျှင် အဆိုပါနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူ အပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ် အနောက်ခြမ်းတွင် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အတော် များများ သေဆုံးကာ လူဦးရေ နှစ်သိန်းခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂသည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ တကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ အစည်းကြီးများသည်လည်းကောင်း ၀င်ရောက်စွက်ဘက်ပြောဆိုကြခြင်းမရှိပါ။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ  အတွင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် အစိုးရကိုယ်တိုင်က လူထုအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုကို ကျူးလွန်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အင်အားစု တရပ်ရပ်က ကျူး လွန်မှုကို အစိုးရက အားပေးကူညီခြင်း၊ တနည်းနည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖေါက်ကျူးလွန်မှုကြီးများ ဖြစ်ပွားနေပါလျှက် ကျူးလွန်သူများကို အစိုးရက ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမှုမပြုခြင်း တို့ဖြစ်လျှင်မူ ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးများ အနေဖြင့် ဖြစ်စေ ၀င်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းကြရသည်။ ဤသည်မှာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့် အရေး ဥပဒေအခြေခံများပေါ်၌ နိုင်ငံတကာက ကျင့်သုံးသည့်အစဉ်အလာ လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရခိုင်ပြည် နယ်၌အလားတူ အခြေအနေများ ဖြစ်ပွားနေသည့် အထောက်အထားများအား နိုင်ငံတကာတွေ့ရှိသဖြင့်သာ ကုလ သမဂ္ဂ နှင့် နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်ပြောဆိုလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလည်း ရှိလာနိုင်သည်။
ဒေါက်တာဒေါ်ရင်ရင်နွယ် နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဝင်အချို့ ပြောသလို နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု နည်းကောင်းနည်းပါမည်။ ဤသည်မှာ အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ တချက်မှာ ဦးသိန်း စိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ပေါင်းကာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများ ကျူးလွန်နေကြောင်း သတင်းမရခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်တချက်မှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဦးသိန်း စိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် မိမိတို့အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများ ကျူးလွန်နေကြသည်၊ ရွာများမီးရှို့ ၊ လူသတ်၊ မုဒိန်းကျင့် စသဖြင့် ကျူးလွန်နေပါသည် ဟု တိုင်တန်းခြင်း မပြုခဲ့သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ယင်းသို့ကျူးလွန်မှု သက်သေအထောက်အထားများ ရှိပါက ကော်မရှင်အနေဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ် အနေဖြင့်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတကာသို့ တိုင်တန်းမည်ဆိုပါက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား အဓိကထား၍ လာေ၇ာက် စစ်ဆေး မေးမြန်းရန်မှာ ရာခိုင်နုန်းပြည့်သေချာသည်။
အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ လတ်တလောအကြောင်းရင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ် မှ စတင်ခဲ့ပြီး တနိုင်ငံလုံးသို့ တဖြေးဖြေး ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်သော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခကြီး၏ လတ်တလော အကြောင်းရင်းမှာ လူမျိုးရေးကွဲပြားမှုနှင့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ခြားနားမှုတို့အပေါ်အခြေခံပြီး တဘက်နှင့် တဘက် အပြန်အလှန်ပုတ်ခတ် စွပ်စွဲကြရာမှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် ပြသနာ မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံအရ ပြစ်မှု ကျူး လွန်သူမှန်သမျှကို ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားဘဲ တန်းတူထား၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ထိထိေ၇ာက်ရောက် အရေး မယူခဲ့ ခြင်းမှာ ပထမ လတ်တလော အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ များကိုယ်တိုင်က ဘက်တဘက်တွင် ရပ်၍ ပြစ်မှု ကြီးများ အား ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည် ဟု နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြ စွပ်စွဲလာသည်က ပို၍ အရေးကြီးသော ဒုတိယ လတ်တလော အကြောင်း ရင်း ဖြစ် သည်။
ဤလတ်တလော အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ဖြစ်တည်လာခဲ့ပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်း တို့လည်း ပေါ်ပေါက် လာပြန်သည်။ ယင်းတို့မှာ ဘာသာရေးအုပ်စုကြီး နှစ်ခုမှ အချို့သော အစွန်း ရောက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာဝင်များ နှင့် အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီများက နည်းလမ်းပေါင်း စုံသုံး၍ လှုံ့ဆော်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခကြီးများသည် တိုင်းပြည်၏ နေရာဒေသ အတော်များများ သို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ ရ ခြင်းဖြစ်သည်။
လတ်တလော အကြောင်းရင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်းတို့ကို နိုင်းယှဉ်လေ့လာရန်လိုပါမည်။ လတ်တလော အကြောင်းရင်းသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းသည် သာသာရေး အရ မတူကွဲပြားသည့် ဘာသာများ အတူငြိမ်းချမ်းစွာရပ်တည်နိုင်ရေး၊ အပြန် အလှန်လေး စားမှု တည်ဆောက်ရေးတို့ နှင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒကို စွန့်လွှတ်ပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲ နေ ထိုင် ရေး အခြေခံတွင် မိမိအမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို သမာသမတ်ကျစွာ ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေး အတွေးအခေါ် စိုက်ထူမှု နှင့် လည်းကောင်း သက်ဆိုင်သည်။
နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းများသည် အရေးမကြီးမဟုတ်ကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့တပြည်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့နေ ပြီ ဖြစ်သော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခကြီး များနှင့် စပ် လျှဉ်း ၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးနီးပါးသည် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်းများအပေါ်တွင်သာ ကုစား အဖြေရှာကြ ရန်ကြိုးပမ်းနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိရောက်မှု အားနည်း နိုင်သည်။
လတ်တလောအကြောင်းရင်းများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ အမှန်တရားပေါ်အောင် အဓိကထားဖေါ်ထုတ်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက် နိုင်မှ သာလျှင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အခြေခံ အားဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ပါမည်။ ထို့နောက် နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်း များကို တဖြေးဖြေး အချိန်ယူကုစားသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် လတ်တလော အကြောင်းရင်းကို မီးမောင်းထိုးကာ အမှန် တရားပေါ်အောင်ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ခြင်း မရှိ။ လတ်တလောအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ် အနက် ပထမ တရပ်ကို ကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရသည်။ ထို့ အပြင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များကိုယ် တိုင်က ဘက်တဘက် နှင့်ပူးပေါင်းကာ ပြစ်မှုကြီးများအား ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်ဟု နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြစွပ်စွဲသည့် ဒုတိယအကြောင်း ရင်းကို လည်း ကော်မရှင်ကမျက်စိမှိတ်ပယ်ချခြင်းမှလွဲ၍ အချက်အလက်နှင့် မငြင်းနိုင်။ သို့ရာတွင် အစီရင်ခံစာ၌ လတ် တလောအကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဖေါ်ထုတ်ဘဲ နောက်ခံအကြောင်းရင်း နှင့်နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်းများကိုသာ ဋီကာချဲ့ပြီးဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဥပဒေစိုးမိုး ရေး အခြေခံကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ကာလုံ နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ တာဝန်ရှိမှုကို ဖုံးကွယ် သွားစေခဲ့ သည်။ ယင်းအတွက် ကော်မရှင်အား ဦးသိန်းစိန်က များစွာ သဘောကျ သွားပုံရ သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ (၆) ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြည်သို့ မိန့် ခွန်းပြော၍ပင် ချီးမွမ်းခဲ့သည်။
(ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်သလား။
ရခိုင်မှ တရုတ်ပြည်သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလျံပေါင်းများစွာ ချီကာ တန်ဘိုးရှိသည့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်း တည်ဆောက်နေပါသည်။ ယင်းအပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိလူထုများက အားကောင်း ကောင်း နှင့် ကန့်ကွက်နိုင်ခြင်း မရှိစေရန်အာရုံလွှဲလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု လူထုအတော်များများက ယူဆလာကြသည်။ ထို့ပြင် တည်ဆောက်ပြီးသည့်အချိန်တွင် လက်ရှိနှင့်နောင်တက်လာဦးမည့် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ဆက်လက် အမြတ်ထုတ်အကျိုးခံစားနေဦးမည့်အပေါ် မကန့်ကွက်နိုင်တော့စေရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထု များနှင့် ၄င်းတို့ ၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ အားနည်းချိနဲ့ သွားစေရန်၊ လုံခြုံရေးအရ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြား လုံခြုံရေး အဖွဲ့များကိုသာ ထာဝရအားကိုးသွားစေရန် မဟာဗြူဟာချမှတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အထက်ပါသုံးသပ်ချက် မမှန်ဟူ၍ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသ်ိန်းစိန် အစိုးရက သက်သေပြလိုပါက ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ် သော သတင်း အချက်အလက်မှန်သမျှကို ရှင်းလင်းစွာ တပြည်လုံးသို့ထုတ်ပြန်ကြေငြာရန်လိုသည်။ ပို၍အရေးကြီး သည်မှာ အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် လူထု၏ စီးပွားရေးမှာ ချွတ်ခြုံကျ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ် သဖြင့် ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရန် ပိုက်လိုင်း မှရသော ၀င်ငွေအားလုံးကို ရခိုင်ပြည်နယ် အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ သုံးစွဲသွားနိုင်စေ ရန် ဥပဒေတ ရပ် ပြဌာန်းကာ လွှဲအပ် ဖေါ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်သည်။
မည်သို့ ပင်နောက်ဆက်တွဲကုစားမှုများပြုစေဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်စီးစေခဲ့သည့်အတွက်ယင်းမှ စတင်ကာ တပြည်လုံးသို့ပျံ့ နှံ့ စေခဲ့ရာ ၌တာဝန်ရှိမှုမှနေ၍ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစ်ိန်အစိုးရသည် ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်။
အဖွဲ့အစည်း သဘော အရ တာဝန်ရှိမှု နှင့် အမိန့်ပေးခြင်းအရ တာဝန်ရှိမှု
၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဖရိန် ရိုင်ယို မွန့်သည် အစ်ဇီးလ်မာယာ အမည်ရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုဝင်ဦးရေ ၁၇၇၁ ဦးအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သည် ဟု စွဲချက်တင်ကာ တရားရုံး၌ သက်သေပေါင်း တရာကျော်ကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၄င်းအပေါ် ထောင် နှစ်ရှစ်ဆယ်ချခဲ့သည်။ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုအတွက် နှစ်ငါးဆယ်၊ လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင် သည့် ပြစ်မှုအတွက် နှစ်သုံးဆယ် နှစ်ခုပေါင်း ထောင်နှစ် ရှစ်ဆယ်ဖြစ်သည်။ “သမ္မတ တာဝန်ယူထားစဉ် အတွင်း သတ် ဖြတ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်နေတာကိုသိရက်နဲ့ ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် ကာကွယ်တားဆီးခြင်း မလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ပြစ်မှု ကျူး လွန်ရာရောက်တယ်” ဟု တရားသူကြီး ဂျက်စ်မင် ဘာရီရော့ က စီရင်ချက်တွင်ထည့်သွင်းဖတ်ကြားသွားခဲ့သည်။
အာဂျင်တီးနား၊ ချီလီ၊ ဂွါတီမာလာ အစရှိသော နိုင်ငံများတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟူသည်ကို အကြောင်း ပြ၍ ပြစ်မှု ကျူးလွန်မှုကြီးများအားမေ့ မထားဘဲ ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ပြီး အရေးယူနေကြခြင်းမှာ စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုး ရေး အခြေခံများ တည်ဆောက်ပြီး တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်၊ ငြိမ်းချမ်းကာ၊ လူထုတရားမျှတမှု ရစေရန်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက် တပ်မတော်နေ့တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ၄င်း၏ တပ်မတော်သည် မည်သည့်အခါကမျှ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု နှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ မကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှု နှင့် လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြစ်မှု  များအား မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းတွင် ဥပဒေ အဖြစ်ပြဌာန်း ထားမှု မရှိသေးပါ။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ၏ အစိပ်အပိုင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်းတို့ကို ချိုးဖေါက် ကျူးလွန်ခြင်းမှာ ပြစ်မှုမြောက်သည်ဟူ၍ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံလိုက် သည့် သဘောဖြစ်သည်။ ယင်းမိန့်ခွန်းကိုးကားကာ အာဏာပိုင်များက ပြဌာန်းထားသည့် ပြည်တွင်းဥပဒေများအတိုင်း သာ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law မှနေ၍ နိုင်ငံတကာ စံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး Rule of Law သို့ ပြောင်းလဲဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် စတင်လှုပ်ရှား လုပ်ဆောင်သင့်ပြီဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုကြီးများအား တပ်မတော်က မကျူးလွန်ပါဟူ၍ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ ငြင်းဆိုချက်ကို မူ လက်ခံနိုင် ဘွယ်မရှိပါ။ ၄င်းပြစ်မှုကြီးများမှာ မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်ကို ဥပဒေသမားများပင်နားလည်အောင် မနည်းကြိုးပမ်းကြရသည်။ ယင်းတို့နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တပ်မတော်အတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပညာပေးရေးလုပ်ခဲ့ ကြောင်း လည်း တကြိမ်တခါမျှ မကြားသိခဲ့ရပါ။ သို့ဖြစ်၍ တပ်ဗိုလ်၊ တပ်သားတကယ့်အများစုကြီးမှာ မည်သည်တို့ကို ကျူးလွန်လျှင် မည်သည့်ပြစ်မှုမြောက်သည်ဟူ၍ နားလည်နိုင် ကြခြင်းမရှိသေးသည်မှာ ရာနုန်းပြည့်နီးပါး သေချာသည်။ လတ်တလောဖြစ်ရပ်များကို သုံးသပ်လျှင်ပင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ရာဇ၀တ်မှု နှင့် လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသတွင် ဆန္ဒပြသံဃာများအပေါ် လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင့်သည့်ပြစ်မှု များ ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြီဟု နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ အခြေခံမှ သုံးသပ်နိုင်သည်။ အသေးစိပ်ကို ဤစာတမ်း၏ ဒုတိယပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေး ပါမည်။
အထက်ပါ ပြစ်မှုကြီးများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တာဝန်ရှိမှုကို ရှာဖွေရာတွင် အဖွဲ့အစည်းသဘောအရ တာဝန်ရှိမှု နှင့် အမိန့် ပေးခြင်းအရ တာဝန်ရှိမှု နှစ်ခုတို့၏ ဆက်စပ်မှုနှင့်ကွာခြားမှု တို့ကို လေ့လာဘို့လိုပါမည်။ သမတ ဦးသိန်းစိန်သည် လည်းကောင်း၊ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည်လည်းကောင်း တိုင်းပြည်တွင် အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် (ကာ/လုံ) ၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသဖြင့် ယနေ့တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခကြီးများနှင့် စပ် လျှဉ်း၍ ၄င်းတို့တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် တာဝန်ရှိကြသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခတွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များအား(ကက/ကြည်း) က တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာအရ ပေါ်လွင်သဖြင့် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် တွင် တာဝန် ရှိသည်။ (ကာ/လုံ) အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက (ကာ/လုံ) အဖွဲ့ဝင် အားလုံးတွင်တာဝန်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ဘဲ သမတ ဦးသိန်းစိန်က ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အား ရခိုင်ပဋိပက္ခများ ကိစ္စ ဆောင်ရွက်၇န်တာဝန်ပေးခဲ့ပါက ဦးသိန်းစိန်သည် အကြီးအကဲ အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် သည် လက်အောက်ငယ်သား အနေဖြင့်လည်းကောင်း တာဝန်ရှိသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကေအိုင်အိုကို ထိုးစစ်ကြီးများဆင်နွှဲခဲ့စဉ် စစ်ရေး သဘောအရ ကာချုပ်မင်းအောင်လှို်င် မှာ အဓိကတာဝန် ရှိသည်။ စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျှဉ်း၍မူ အကြီးအကဲ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တွင် တာဝန်ရှိသလား၊
စစ်မြေပြင်တခုလုံးကို အနီးကပ်ကွပ်ကဲရသည့် လက်အောက်ငယ်သား မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှုးတွင် တာဝန်ရှိသလား ဟူသည်ကို သုံးသပ်ရပါမည်။ ဤတွင် နိုင်ငံတကာဓလေ့ ထုံးတမ်းဥပဒေ အရသာ မက (ရ၀မ်ဒါ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာခုံရုံး က ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဆီအာရာလီယွန်းအထူး တရား ရုံး ကပါ လိုက်နာကျင့်သုံး ခဲ့ သည့် လက်တွေ့အရ) သမားရိုးကျနိုင်ငံတကာဥပဒေ အဖြစ်ပင်လိုက်နာကျင့် သုံးလာကြပြီဖြစ်သော သတ်မှတ် ပြဌာန်းချက်အရ အကြီးအကဲ နှင့် လက်အောက်ငယ်သား ဆက်ဆန်ရေး အရတာဝန်ရှိမှု ကို လေ့လာရန်လိုပါသည်။ ဂွါတီမာလာနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဖရိန် ရိုင်ယိုမွန်၏ မှုခင်းနှင့် နိုင်းယှဉ်လေ့လာလျှင်အကျိုးရှိပါမည်။
အပိုင်း (၂) ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်
ဦးအောင်ထူး (ရှေ့နေ) ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ယက် တည်ထောင်သူ
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ
1 Genuine Principles of the Rule of Law
2 The People’s Republic of China exercises power in accordance with the law and establishesasocialist country under the rule of law.
4 Supreme law of the land
7 Organizational responsibility
8 Command responsibility9General Efraín Ríos Mont 10 Judge Jazmin Barrios
13 Crime against humanity
16 Customary international law
17 International Criminal Tribunal for Rawanda
18 Special Court for Sierra Leone
19 Conventional international law
20 Relationship of superior-subordinate
This entry was posted on May 16, 2013, in ဥပဒေ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၈၀ ကျော်ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက တာ့ခရိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် မြန်မာနိုင်ငံသား ၈၁ ဦးကို ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က မဲဆောက်မြို့မြောက်ဘက် မဲ့ကဆာကျေးရွာက တောင် ယာတွေထဲမှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မဲဆောက်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာပြည်သားများအရေး ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦမိုးကြိုး က ပြောပါတယ်။
“ဘန်ကောက်တက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ၊ လူပွဲစားတွေကနေပြီးတော့ ဘတ် ၃၀၀၀ နဲ့ပို့ပေးမယ်၊ ဘတ် ၃၀၀၀ ကနေပြီးတော့ ဘတ် ၁၅၀၀၀ ခွဲပေါ့ဗျာ၊ အစားစားပေါ့ သူတို့ပို့ပေးမယ်၊ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ စက်ရုံတို့၊ ဆောက်လုပ်ရေးတို့၊ အိမ်ဖော်တို့ အဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေ ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ မက်လုံးပေးပြီးတော့ ထား ထား တာ၊ အဲ့ဒါကို နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ အမှန်တော့ နယ်တော့ ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ကနေ မသင်္ကာဖွယ်ရာတွေ့ရှိတာနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို အကြောင်းကြား၊ နယ်ခြားစောင့် တပ်ကနေ မဲဆောက်မြို့နယ် ရဲကိုအကြောင်းကြားတာ”
သူတို့တွေဟာ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် လူပွဲစားတွေဆီကနေတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲက ရောက် ရှိခဲ့ကြတာ လို့ဆိုပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေထဲက အယောက် ၃၀ ခန့်ကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ အမှတ် ၁၇ ကူးတို့ဆိပ်ကနေ မနေ့က မြန်မာနိုင် ငံဘက်ခြမ်း ကို ပြန်လည် ပို့ဆောင် လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း မဲဆောက်မြို့နယ် မယ်ပရပ်ကွက်မှာ တရားမဝင် ဝင်ရောက်နေထိုင်သူ ၁၂၀ ခန့်ကို ထိုင်းလဝကက ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
This entry was posted on May 16, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် တောင်ကိုးရီးယားနှင့် အမေရိကန်ခရီးစဉ်အဖြစ် ထွက်ခွာသွားသော မင်းကိုနိုင် ဦးဆောင်သည့် ၈၈ အဖွဲ့ဝင်အချို့ အမေရိကန်တွင် OIC အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံ ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း OIC အဖွဲ့မှ ပြောခွင့်ရ သူတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ OIC အဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေချကာ ဘင်္ဂလီ လူမျိုးများအား ကူညီထောက်ပံ့ခွင့်ရရန် ကြိုးစားနေသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှလည်း ပြည်သူလူထုသဘောမကျလျင် OIC အား လက်ခံဖွယ် မရှိကြောင်း ကြေငြာထားခဲ့သည်။ OIC အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေချရေးအား အစိုးရမှ လက်မခံသဖြင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများထံမှတစ်ဆင့် စည်းရုံးခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၈၈ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ သုံးသပ်ခဲ့သည်။ မင်းကိုနိုင် ဦးစီး ၈၈ ကျောင်းသားများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များတွင် ဘာသာခြားများဘက်မှ ရပ်တည်ပြောဆိုမှုများကြောင့် မကြာခဏ ဝေဖန်ခံရလျက် ရှိသည်။ ယခုလ အစောပိုင်းကလည်း မင်းကိုနိုင်နှင့်အဖွဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်အတွက် Father Land ကုမ္မဏီမှ ငွေသိန်း ၅၀ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ တရားဝင် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ၈၈ အဖွဲ့၏ ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်း ဟိုပန်မြို့သို့ သွားရောက်စဉ် ဒေသခံ များမှ လက်မခံဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့သဖြင့် ဟိုပန်ခရီးစဉ် ဖျက်ခဲ့ရသည်။
၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ တောင်ကိုးရီးယားနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်အနေဖြင့် တောင်ကိုရီးယားတွင် ဂွမ်ဂျူး လူ့အခွင့်အရေးဆုအား လက်ခံရယူပြီး အမေရိကန်သို့ ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့တွင့် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဘာလီဗုံးခွဲမှုတွင် အဓိကကြိုး…ကိုင်သူဟု စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ အဘူရ် ဘာကာ ဘာရှားက မြန်မာပြည်ကို ဂျီဟတ် ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲမယ်လို့ မေ ၄ရက် နေ့မှာ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်။ဂျကာတာမြို့တော်က မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ ကြံစည်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ လူ ၂ယောက်ကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့က ဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်အပြီးမှာ အဘူ ဘာရှားက ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ ဆစ်ဒနီမော်နင်း ဟာရယ်သတင်းစာက ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ရာပေါင်းများစွာသော အစ္စလာမ်မစ် ကာကွယ်သူများ တပ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သောကြာနေ့က ဂျကာတာ မြို့လယ်မှာ စုဝေးခဲ့ကြပြီး ဂျီဟတ်စစ်ပွဲအတွက် မြန်မာပြည်ကို တိုက်ခိုက်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူနည်းစု မွတ်ဆလင်တွေကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအတွက် တုံ့ပြန်ကလဲ့စားချေ ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
This entry was posted on May 6, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
By burmamuslim on May 4, 2013 | LeaveaComment
ဗမာ့တိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်မ်-အောင်ကျော်မိုးအဆိုပါတရားဝင်ဆန္ဒပြခြင်းကို အင်ဒိုနီရှား အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး လုံးခြုံရေးကိုလည်းတင်ကျပ်စွာချထားတယ်လို့သတင်ရရှိပါတယ်။
ထို့အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းကို အင်ဒိုနီရှားအစိုးရဘက်မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုသလို မြန်မာ အစိုးရဘက်မှလည်း လေးစားဖို့လိုတယ်လို့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အင်ဒိုနီရှားစာရေးဆရာတစ်ဦးကလဲ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အခုလို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော် ထုတ်ခြင်းကို အလေးမမူ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေက ဒီထက်ပိုရှုပ်ထွေး လာနိုင်တယ်လို့ ၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီစကားကို အင်ဒိုနီရှားမှာရှိတဲ့ အစိုးရအတိုက်ခံ မွတ်စလင် မ်တပ်မတော်တွေရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလဲးရှိနေတယ်လို့ ၎င်းကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း လည်းသိရပါတယ်။
This entry was posted on May 5, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 22, 2013, in ဗီဒီယို, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
“ခင်ဗျားတို့လုပ်နိုင်တာ ဆုတောင်းရုံပါပဲ” – ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များအပေါ် လူသားမဆန်သော ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုများ နှင့် လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုများ
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ စာမျက်နှာ ၁၆၅ မျက်နှာ အစီရင်ခံစာအတွင်း မြန်မာအစိုးရအာဏာပိုင်များက ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်များအပေါ် လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဆောင် ရွက်နေပြီး ယနေ့တိုင် စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီများ၊ ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများ မရရှိအောင် ပိတ်ဆို့ဟန့်တားထားဆဲ ဖြစ်သည်ဟု လူ့အခွင့် အရေး စောင့်ကြည့် အဖွဲ့ HRW က ဧပြီ ၂၂ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်နှင့် အောက်တိုဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေးဘာသာရေး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း နေအိမ်မီးရှို့မှုတွေ၊ အပြစ်မဲ့ပြည် သူတွေကို သတ်ဖြတ်မှုများကို ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရခိုင်ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများ နှင့် သာမာန် အရပ်သူအရပ်သားများက ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လုံခြုံရေး အင်အားစုများ ဖြစ်သော ရဲ၊ လုံထိန်း၊ နစကအဖွဲ့၊ စစ်တပ်နှင့် ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင် များ ကို သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုများအား လက်ပိုက်ကြည့်ရုံတင်မက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ပြီး ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု HRW ရဲ့ အာရှဆိုင် ရာ လက်ထောက် ဒါရိုက်တာ ဖီလ် ရော်ဘင်ဆန်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလအတွင်း တကျော့ပြန်အကြမ်းဖက်မှုများအတွင်း အစိုးရလုံခြုံရေး အင်အားစုများက ဓါးရှည်များ၊ ဝါးချွန်များ၊ တုတ်များ၊ လက် လုပ်သေနတ် များ ကိုင်ဆောင် ထားသည့် အင်အားစုများနှင့်အတူ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များ၏ နေအိမ်များကို စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှု များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွာလုံး ကျွတ် ပြာ ပုံဖြစ်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်များ၊ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံထားရသူများကို စနစ်တကျ အလောင်းဖျောက်ဖျက်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာ က ထုတ်ဖေါ်ရေးသားထားသည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာနဲ့ပက်သက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာများ၊ ကမန်လူမျိုးများ၊ ရခိုင်လူမျိုး နှင့် မြန်မာလူမျိုးများကို အကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း Mass Grave ဟုခေါ်သော အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းများ မြှုပ်နှံထားသည့် နေရာ ၄ခုကို HRW က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အစိုးရအာဏာပိုင်များက အလောင်းများ ဖျောက်ဖျက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများကို စုံစမ်းရန် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကော်မရှင်ကို ခွင့်ပြုသင့်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ထောက်ပံ့ကူညီလိုသည့် အလှူရှင်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် အခြေအနေမှန်ကို သိရှိနားလည်ရန် လိုအပ်နေပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုများအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ခံမှုရှိသော အရေးယူမှုများ လုပ်ဆောင် ဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်း HRW မှ ဖီလ် ရော်ဘင်ဆန်က ဆိုသည်။
HRW ရဲ့ အစီရင်ခံစာ မူရင်းကို ဒေါင်းလုတ် ရယူလိုပါက ဒီလင့်ကိုနှိပ်၍ ယူနိုင်ပါတယ် >>>
This entry was posted on April 22, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, ဥပဒေ, နိုင်ငံတကာသတင်း, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
မြန်မာအစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာ တိကျတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူဝါဒချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်နေတာ မတွေ့ ရသေးကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မနေ့က ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မနေ့က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ သတင်းထောက်များကလပ်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက်တစ်ဦးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုတွေ မြန်ဆန်လွန်းတာကို ဘယ် လိုသုံးသပ်ပါသလဲ၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလို့ သတင်းထောက် တစ်ဦးက မေးမြန်းရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “မိမိအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းအနေနဲ့ အကဲမဖြတ်ပါဘူး၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့သာ အကဲဖြတ်ပါတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုး ရ ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အားအနည်းဆုံးအချက်ဟာ တိကျတဲ့မူဝါဒချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်နေတာမျိုး မရှိခြင်းပါပဲ၊ လတ်တလော မြင်နေ ရတာက ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးမှာ အဆင့်လိုက်သတ်မှတ်ပြီး အကောင်အထည် ဖေါ်နေတာမျိုးမရှိသလို၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အခြေခံပြီး ချမှတ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖေါ်နေတာမျိုး မတွေ့ရ ပါဘူး” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးဟာ သူထင်ထားတာထက် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းပိုကျကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မိမိထင်ထားတာထက် ပိုအောင် မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် အံ့အားသင့်ရပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုလွှတ်တော်အတွင်း အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ ပြည် သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထူးအလေးထား ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိမရှိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့သူတွေကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးသင့်ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on April 19, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ရိုက်တာ မြန်မာနိုင်ငံ၏အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မိမိနိုင်ငံတွင်းရှိ လူနည်းစုမွတ်စ်လင်မ်တို့၏အခြေအနေမှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ဖြစ် နေကြောင်း၊ ယင်း လူ့ အဖွဲ့အစည်းအား လုံခြုံမှုရရှိစေရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။လွန်ခဲ့သောလအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုနေထိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အကြမ်းဖက် မှု များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ ထောင်ပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။ ဒုက္ခသည် များ တွင် မွတ်စ်လင်မ်က အများစုဖြစ်သည်။ ၄င်းအကြမ်းဖက်မှုများ သည် နိုင်ငံ၏အလယ် ပိုင်းဒေသ တစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီသ၍ အကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံသော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဤတင်းမာမှုများ အပေါ် နှုတ် ဆိတ်နေခဲ့သော်လည်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့အလည် အပတ် သွားရောက်စဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်၌ အောက်ပါကဲ့သို့ ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
“ မကြာသေးခင်ကပဲ မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့နဲ့ ကျွန်မ တွေ့ဆုံလာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြန်မာကလွဲပြီး တခြားနိုင်ငံကို မရောက်ဖူးကြပါဘူး။ မြန်မာကလွဲပြီး တခြားဘယ်နေရာ ကိုမှ အမိမြေ အဖြစ် မခံယူကြပါဘူး။ သူတို့ကို ကျွန်မတို့ရဲ့နိုင်ငံသားမဟုတ်သလို အထင်ရောက်သွားအောင် ဖန်တီးနေတာက တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ဒီအနေအထားမျိုးက တကယ် ၀မ်းနည်း စရာကောင်း တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒီအရေးအရာတွေကို အခြားရှုထောင့်အမြင်ကနေ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လာစေဖို့ ချဉ်းကပ်လေ့လာရပါလိမ့်မယ် ”။
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုလည်း အစိုးရပိုင်းမှ ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာများမှာ နိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ် ကိစ္စကိုမူ တိုက် ရိုက်မဖြေ ကြား ခဲ့ချေ။
“ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ဥပဒေများဟာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့မကိုက်ညီယင် ဖြစ်နိုင်ချေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီလို လုပ်နိုင် အောင် သတ္တိမွေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်။ နိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတစွာ ရင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ် ” ဟု သတင်းထောက်များအား ပြောဆိုခဲ့သည်။
တိုကျိုတက္ကသိုလ်၌ ကျောင်းသားတစ်ဦး၏မေးခွန်းအပေါ် – မိမိသည် မှော်ဆရာတစ်ဦး မဟုတ်သဖြင့် ကာလကြာရှည် အငြင်းပွားနေရသော လူမျိုးရေးကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးရန် မလွယ် ကူသေး ဟု ဒေါ်စုကြည် မှ ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့သည်။
“ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖော်ဆောင်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါဘဲလို့ ကျွန်မ (အမြဲ) ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ တရားစီရင်ရေး တစ်ခုတည်းကိုသာ ဆိုလိုတာ မဟုတ် ပါ ဘူး။ စီမံညွှန်ကြားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပြည်သူ့ရဲကဏ္ဍ၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေကို ပေးတဲ့ သင်တန်း – ဒါတွေအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ် ”
“ လူတွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ ဒီကွဲလွဲမှုတွေကို ဘယ်လိုပျောက်အောင် လုပ်မလဲလို့ သူတို့က ကျွန်မကိုပြောစေချင်တယ်။ ကျွန်မက မှော်ဆရာ မျက်လှည့်ဆရာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဟုတ်ခဲ့ ယင်တော့ ပျောက်စေလို့ ပြောမိမှာပါဘဲ။ ခြားနားကွဲပြားမှုတွေကို အဖြေရှာညှိယူဖို့ ရေရှည်အချိန်ယူရမှာပါ။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ လုံခြုံငြိမ်းချမ်းတဲ့ အသိုက်အ၀န်းတစ်ခု ကို ဖော်ဆောင် ဖို့ လိုပါ တယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ အမြင်မတူသူတွေ အတူတကွ ထိုင်လို့ အယူအဆချင်း ဖလှယ်နိုင်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့အကြား တူညီတာ လက်တွဲနိုင်တာကို စဉ်းစားယူရပါလိမ့်မယ် ” ဟု ဂျပန်ကျောင်း သားတို့ အား ပြောကြားခဲ့သည်။ ၄င်းအပြင် မြန်မာတရားရုံးများသည် ဒီမိုကရက်တစ်အဆင့်သို့ မတက်လှမ်းလာဘဲ အခွင့်ထူးခံများသာ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေသေးကြောင်း ထည့် သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အစ္စလာမ်နိုင်ငံမ­ျား ပူးပေါင်းဆောင်ရ­ွက်မှုအဖွဲ့OIC က 14-04-2013 တနင်္ဂနွေနေ့က ဆော်ဒီ အာရေဗျာ နိုင်ငံ ဂျဒ္ဒားမြို့ တွင် ယနေ့ ကျင်းပသောတူရကီ၊­ အာဖဂန် နစ္စတန်၊ ယူအေအီး၊ ဘရူးနိုင်း၊ ဂျီဘိုတီ၊ အင်ဒို နီးရှား၊ မလေးရှား၊ အီဂျစ်၊ ဆီနီ ဂါလ် နှင့် ဆော်ဒီ အာရေဗျာ စုစု ပေါင်း 57 နိုင်ငံ များမှအစ္စလာမစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ များ၏ နိုင်ငံ ခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်း အဝေးတွင် အောက်ပါအချာက်အလက်များ ကို တောင်း ဆို ဆုံးဖြတ် ကြေ ညာ လိုက်ပ­ါတယ်။
1. မြန်မာနိုင်ငံကိ­ု OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွ­ဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေး­ခွင့်ပြုဖို့
2. မြန်မာနိုင်ငံမှ­ာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေန­ဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့
3. ဝန်ကြီးအဆင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွ­ဲ့တစ်ဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိ­ု လာရောက်ခွင့်ပြု­ဖို့
4. အချက်အလက်ရှာဖွေ­ရေး မစ်ရှင်တစ်ဖွဲ့ေ­စလွှတ်ဖို့
5 လူ့အခွင့်အရေးကေ­ာ်မရှင်ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို­လာရောက်ဆွေးနွေး­ခွင့်ပြုဖို့
6. မြန်မာနိုင်ငံမှအစ္စလာမ်­ ဘာသာဝင်တွေရဲ့အသက် အုိုအိမ် အ ပြည်အဝ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာအစိုးရမှာလုံးချုံး ပေးရန်နှင့်
7. အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းမျ­ား၊ အိမ်များ ၊ ပညား ရေ ၊ကျန်းမာရေး ၊ စီပွား ရေ ၊ မျ­ားကို အ ပြည်အဝကာကွယ် လုံးချုံးမှု ပေးမည် ဟု မြန် မာနိုင် ငံအစိုးရမှာ ကုလသမဂ္ဂ United Nation ထံသို့ အ မြန်ဆုံကတီ ပြုလက်မှတ်ထို ပေးရန်၊ မြန်မာအစိုးရကို­ ပန်ကြား တောင်းဆိုလိုက်ပ­ါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ­ာ မနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတ­ွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များကြား­ အဓိကရုန်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့တြာေ­ကာင့် လူ ၁၈ဝ သေဆုံးခဲ့ရသလို၊­ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအ­တွင်းက မြန်မာနိုင်ငံအလ­ယ်ပိုင်း မိတ္တီလာမြို့ကစတ­င်တဲ့ အဓိကရုန်းတွေကြေ­ာင့် ၄၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်­။ ဒါ့အပြင်အစ္စလာမ်­ ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းမျ­ား၊ အိမ်များ အဖျက်အဆီးခံခဲ့ရ­ပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်များ­ကို တနင်္ဂနွေနေ့14-04-2013က ဆော်ဒီအာရေးဗျနိ­ုင်ငံ Jeddah မြို့မှာပြုလုပ်­တဲ့ OIC နိုင်ငံခြားရေးဝ­န်ကြီးများ အစည်းအဝေးကနေ တောင်းဆို ဆုံးဖြတ် ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပ­ါတယ်။
This entry was posted on April 15, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
Burma’s Rohingya Treatment Violates International Law
Burma’s Treatment of the Rohingya and International Law
This entry was posted on April 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ဥပဒေ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍အရေးယူရန် OIC အသင့် ရှိဟုဆို
This entry was posted on April 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ထိုင်းနိုင်ငံ နောင်းခိုင်မြို့အနီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှ စိတ်ကြွဆေး နှင့် ကာမဆက်ဆံမှု လဲလှယ်
Michael Zaw and Aungtinsan Aungtinsan shared Kyawswar Tun‘s photo.
ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှ စိတ်ကြွဆေး နှင့် ကာမဆက်ဆံမှု လဲလှယ်ထိုင်းနိုင်ငံ နောင်းခိုင်မြို့ တွင် အနီးအနားရှိ ဒေသခံများ၏တိုင်တန်းချက်အရ ဇရပ်တစ်ခုအား ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ရုတ်တရက် ၀င်ရောက် ရှာဖွေရာ တွင် စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့်အတူ ကိုယ်လုံးတီးကာမဆက်ဆံ နေဆဲရှိသော ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ အား ဖမ်းစီးရမိခဲ့ ကြောင်း ယနေ့ ထုတ် www.khaosod.co.th သတင်းဌာန တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ အဆိုပါဘုန်းကြီးသည် အသက် ၅၀ ရှိပြီး စိတ်ကြွဆေးပြားများ လက်ဝယ်ထားရှိကာ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရန် ပိုက်ဆံမပေး လိုသော အမျိုး သမီး များ တစ်ခေါက်လျှင် ဆေးနှစ်လုံး ဖြင့် ကာမဆက်ဆံမှုင့် လဲလှယ်ရကြောင်း ပါရှိပါသည်။
This entry was posted on April 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 10, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
မြန်မာဘွဲ့ရတွေကို နောင်ဆို စင်ကာပူတွေက ကြောက်ပြီး အိမ်ဖော်တောင် ခန့်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။
အခုလို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ မျက်နှာပန်းလှအောင် ကြိုးစားဖော်ဆောင်ပေး ခဲ့တဲ့ ကိုရဲမင်းဦး ၊ ဦးဝီရသူ အပါအ၀င် အဖွဲ့များအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
8-4-2013 Singapore Strait Time (Page A11)
This entry was posted on April 9, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
မလေးရှားမှာဘုန်းကြီးနှင့်ဒကာမနှစ်ပါးသွားပုံ၊ A monk andalady sex play
ATTENTION!!! We would like to highlight this matter which concerns everyone in Malaysia especially the ladies.
Please do not fall prey to bomoh, monks or mediums claiming that you’re followed by unclean spirits, specific ailments that you’re suffering from, especially those that claim that they can change your luck.
Every year more and more people are afraid to report such matter due to fear of being ridiculed by people whom you know. Avoid falling into the traps of those scams !!
This entry was posted on April 9, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 6, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
မိတ္ထီလာမြို့အကြမ်းဖက်လူသတ်၊လုယက် မှုကြီးမှာ ကြိုတင် ကြံစည် လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရ …
နတ်တလင်းမြို့မှ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဗလီပုံ
အခင်းမဖြစ်ပွါးမီ၂၀၁၃ခုဇန်န၀ါရီလမှစတင် ကာအကြမ်းဖက်အုပ်စု များနှင့်ရပ်ကွက်များ အတွင်းမွတ်စလင်(မ်) အိမ်စာရင်းများကို လျှို့ဝှက် ကောက်ယူခဲ့ကြောင်းခိုင် လုံသောသတင်းများ စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။
အခင်းမဖြစ်မီနာရီဝက်ခန့်မှစတင် ကာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး လိုင်းများဖြတ်တောက်ခံထားရ သည်မှာ ထူးခြားချက်တစ်ရပ် ပင်ဖြစ်နေကြောင်းသုံး သပ်တွေ့ရှိရပါသည်။ထို့ပြင်အခင်း စတင်ဖြစ်ပွါး သည်နှင့်မြန်မာနိုင်တပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့်အခြေအနေကို အချိန်မီထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အခွင့် အရေး ရှိသော်လည်းတာဝန်မဲ့စွာနေ ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ပြင်အကြမ်း ဖက် အုပ်စု များ သည်မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရင်းနှီးသူ များဖြစ်နေပြီး၊ ၄င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ခဲ့သော အထောက် အထားများတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ မိတ္ထီလာမြို့တွင် အမှတ် (၉၉)ခြေမြန် တပ်မ ဌာနချုပ် အပါဝင်ခြေလျင်/ခြေမြန် တပ်ရင်း များ၊ အကူလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များရှိနေပါ လျှက်တာဝန်မဲ့စွာလျှစ်လျှူရှုထား သည့်အပြင်လုယက် မှုများတွင်ပင်တပ်မတော် သား များ အရပ်ဝတ်ဖြင့်ပါဝင် ခဲ့ကြကြောင်း အထောက်အထားများရရှိပြီြးုဖစ် ပါသည်။
မြို့ခံ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အများစုမှာ အစောပိုင်းအခင်းဖြစ်ပွါးစဉ် ကပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်းနောက် ပိုင်း လုယက် မှုများတွင်၉၀ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်လုယက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ သူခိုးဈေးကွက်ဟု ပင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ။မြို့နယ်/ခရိုင်/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ သည်လည်းအကြမ်းဖက်သူ များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခဲ့သည့်အထောက်အထားများရရှိခဲ့ပါသည်။
အကြမ်း ဖက်အုပ်စုများသည်မြင်းခြံ (တောင်သာ)လမ်း ၊ကျောက်ပန်းတောင်းလမ်းနှင့် မန္တလေးလမ်းများ အတိုင်းသုံးဖွဲခွဲပြီးမော်တော်ယာဉ်(Express) များဖြင့်ဝင်ရောက်လာကြကြောင်း၊ ယာဉ်အမှတ်များတပ်ဆင် ထားခြင်းမရှိ ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါအကြမ်းဖက်အုပ်စုများ ဆုံမိချိန်တွင်အကြမ်းဖက်လုယက် လူသတ်မှု များ စတင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကြံခဲ့ ကြကြောင်း စီစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။
၂၂-၃-၂၀၁၃ခုနှစ်(၁၄၀၀)ချိန်တွင်အကြမ်းဖက်အုပ်စုများပြန်လည်ထွက်ခွါသွားပြီးမှသာလုံခြုံရေးအစီအမံ များစတင်ဆောင်ရွက်သည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးတယ်လီဖုန်းလိုင်းများကိုလည်းပြန်လည် သုံးစွဲ ခွင့် ရခဲ့ကြောင်းတွေ့ ရှိရပါသည်။ရွှေဆိုင်ပြဿနာဆိုသည်မှာလည်းရမယ်ရှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၊မည်သည့်ရောင်း သူမှသေဆုံးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
အခင်းဖြစ်ပွါးစဉ်အတွင်းသေဆုံးသူ(၂၀၀)ကျော် ခန့်စာရင်းရရှိပြီး၊သေဆုံးသူများ အားသက်ဆိုင်ရာဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမြေမြုပ် သင်္ဂြုလ်ခွင့်မပြုခဲ့ပဲ၊တာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် စာရင်း လိမ် အလောင်း များဖျောက် ဖျက် ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်မနေထိုင်လို ပဲမိမိဆွေမျိုးသားချင်းများထံပြန် လိုပါကပုံစံ(၇)စောင်ဖြည့်စွက် လက်မှတ်ရေးထိုး ကာ၊ တာဝန် ခံခေါ်ယူသူနှင့်ဓါတ်ပုံ တွဲရိုက်မှတ်တမ်းတင်ရာ တွင် အသုံးပြုသောပုံစံများမှာ(၂၀၁၂) ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကပြုစု ထားသောပုံစံများဖြစ်နေသဖြင့်ကြို တင်ကြံ စည်ဆောင် ရွက် ခဲ့ကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင်ပါဝင် ပတ်သက်နေကြောင်းစုံစမ်းဖော် ထုတ် သိရှိခဲ့ရပါသည်။
This entry was posted on April 2, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ကမ္ဘာ့မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင်များမြန်မာမွတ်ဆလင် အရေးဆွေးနွေး၊ World Muslim body to meet on Myanmar violence
JEDDAH, Saudi Arabia – The head of the Organisation of Islamic Cooperation said on Saturday that ministers from OIC states will meet on April 14 in Saudi Arabia to discuss deadly violence against Muslims in Myanmar.
State media in Myanmar reported on Saturday that the death toll from communal violence in the centre of the country over the past 10 days has risen to 43 with more than 1,300 homes and other buildings destroyed.
An OIC statement said Ihsanoglu addressedacontact group meeting on violence against Myanmar Muslims known as Rohingya on Saturday and said the organisation was “ready to take all necessary measures and actions to deal with it”.
Ihsanoglu also pressed the government of Myanmar to “put an end to the Buddhist extremists and hate campaigns, as well as ethnic cleansing that they had launched against Muslims in the country”.
On Friday, Myanmar strongly rejected comments by the UN’s special rapporteur on Myanmar human rights, Tomas Ojea Quintana, the previous day that he had “received reports of state involvement in some of the acts of violence”.
This entry was posted on April 2, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
This entry was posted on March 31, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းပဋိပက္ခတွင် အစိုးရပါဝင်ပါတ်သက်သည်ဟု ကင်တားနားပြော
This entry was posted on March 31, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ Kaohsiung မှာရှိတဲ့ နဂါးအားကစားကွင်း (Dragon Stadium) ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အားကစားကွင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်…
ဂျပန် ဗိသုကာပညာရှင် Toyo က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး solar ပြား 8844 ခုကိုအသုံးပြုထားကာ အားကစားကွင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ မီးလုံး 3300 နဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား screen အကြီးစားနှစ်ခုတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပမာဏထက်ကို ပိုပြီးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်…
တစ်နှစ်ကို ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း 1.14 သန်း ထုတ်လုပ်ပေးပြီး အဲ့ဒီလောက်ပမာဏထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် 660 တန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်…
ဒီအားကစားကွင်းဟာ 19 ဟက်တာ (190000 စတုရန်းမီတာ) ကျယ်ဝန်းပြီး ထိုင်ခုံနေရာ 55000 ပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်…
အေးချမ်းမွန် Credit & Copy From >>နှိုင်းရင့်နွေ<< Thank
This entry was posted on March 26, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် မတ်လ (၉) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ရိုဟင်ဂျာများကို ဖိတ်ကြားမပြုလုပ်ဘဲ တစ်ဖက် သတ်ပြု လုပ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။ သို့သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ သမိုင်း သုတေ သီတစ် ဦးဖြစ်သည့် ဦးဌေးလွင်ဦးလည်း မိမိတို့၏အစီအစဉ်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဦးဌေးလွင်ဦးမှ ရိုဟင်ဂျာဟူသည့် လူမျိုးအမည်သည် ၁၈ ရာစုမတိုင်မှီကတည်းက တည်ရှိခဲ့သည်ကို သက်သေပြနိုင် ခဲ့သော်လည်း ရခိုင်သမိုင်း ပညာရှင် ဒေါက်တာအေးချမ်း အဆိုပါရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် လူမျိုးအ မည်သည် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ရည်ညွန်းသည်ဟု ရယ်မောဖွယ်ရာ ဟာသကြီးသဖွယ် ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
Francis Buchanan-Hamilton ရေးသားခဲ့ရာတွင် မဟာမေဒင် (Mohammedans) များကို ရိုအင်ဂါဟုခေါ် သည်ဟု ယနေ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ပြောဆိုနေသည့် ဘာသာစကားကိုပင် ရေးသား၍ ဖော်ညွန်းထားပေ သည်။
ဦးဌေးလွင်ဦး၏ မေးမြန်းချက်များနှင့် ဒေါက်တာအေးချမ်း ဟာသသဖွယ် ဖြေကြားချက်များကို အောက်ပါ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများတွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
This entry was posted on March 17, 2013, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
Questions to Dr. Aye Chan by Political Parties
The Arakan History Forum was held in Bangkok, Thailand on March 9, 2013 under supervision of Historian Dr. Aye Chan. And another seminar was held yesterday in MICT Park, Yangon, Myanmar. Three Rohingya political parties based in Yangon requested to answer some questions relating to Arakan history. The questions were sent in Burmese language on March 13, 2013.
The questions of three Rohingya political parties were translated into English by RB Team.
The questions sent by Democracy and Human Rights Party (DHRP):
Are there any records in Arakan chronicle that, with the help of Muslim troops under Gen. Sandi Khan dispatched by Bengal Sultan, Min Saw Mon (a) Narameikhla conquered Mrauk-Oo and reined the kingdom?
Based on the above historical records, can it be denied that Muslims have been living in Arakan since 1430?
Can Arakan chronicles that mention the reign of Muslim kings assuming the titles of Sultan or Raja be denied?
Would you reject the evidences that coins were issued in Arakan in Islamic scripts?
Is it true that, during parliamentary period, with the cabinet decision, the second independence hero Prime Minister U Nu had recognized “Rohingya” asadistinct ethnic race and Rohingya language programme was relayed from government’s Burma Broadcasting Service (BSS)?
Do you deny the statement of the Chief of Staff Gen. Aung Gyi who, on behalf of the government, promised that the rights and privileges of the Rohingya people would be guaranteed as an ethnic group on par with other nationalities of the country?
The questions sent by National Development and Democratic Party (NDPD)
Is monument or stone tablet inscription primary source or secondary source?
Are the words or vocabularies found in Ananda Stone Pillar inscription Rakhine or Burmese language?
Do you know the words or vocabularies found in Ananda Stone Piller inscription (Kyaukza) are on the whole similar to the language spoken by Rohingyas today?
Do you know, according to purapaik (writings on thin and folded substances) preserved during the time of Burmese King Bodawpaya, the language of Wethali period has utmost similarity with the language spoken by Rohingyas today?
Do you know there were Pathi Kala Muslims in Arakan during the reign of Bodawpaya and had appointed Qazis in4wadis (regions) or in the whole of Arakan by imperial orders for the administration of justice?
The questions sent by National Development and Unity Party (NDUP)
Do you know, in 1799 the British envoy Francis Buchannan in his research work recorded that there were ethnic Rohingyas, who were natives and had long settled in Arakan?
Do you know, Francis Buchanan recorded the Rohingya language isaseparate language different from the Bengali?
Do you know, according to the report of the British Commissioner Mr. Charles Paton, the population of Arakan before British’s entry or 1823 was 100,000 consisting of 60,000 Maghs, 30,000 Muslim Arakanese and Burman 10,000?
Do you accept the report of Mr. Charles Paton as primary source? If you accept it, do you want to reject those Muslim Rohingya Arakanese who formed one-third of the total population of Arakan before 1823 as second largest community and citizens by birth?
Do you know, according to that report, Muslim Arakanese (Rohingyas) were appointed or had served the Burmese kings as commissioners, administrators, police officers, Kyun Ouk (Circle officers) Zamindars or landlords , Kyedangyis (village officers) ?
It has been accused that during colonial rule the British had brought people to Arakan from Bangladesh. Would you mention the number of foreigners living in the townships of Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab, Kyaukpyu and Sandoway who were paying alien taxes?
This entry was posted on March 17, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
အင်တာနက် အခြေပြု ကမ္ဘာကျော် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် ဂူဂဲလ်၏ ဥက္ကဌ မစ္စတာ အဲရစ်ရှမစ် မကြာမီ မြန်မာပြည် လာရောက်လည်ပတ်ရန် ရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီနှင့် နီးစပ်သူများက ဧရာဝတီ သို့ ပြောကြားသည်။
ဂူဂဲလ်၏ ဥက္ကဌသည် ဇန်နဝါရီလအတွင်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် မစိမ်းသည့် ဒီမိုကရက်ပါတီ၏ ထင်ရှားသော နိုင်ငံရေးသမား မစ္စတာ ဘေလ်ရစ် ချတ်ဆန်နှင့်အတူ အင်တာနက်ကို ချုပ်ထိန်း ထား သည့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အစိုးရအရာရှိများ၊ ကျောင်းသားများ၊ သိပံ္ပပညာရှင်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယခုလအတွင်း ဖြစ်မြောက်ရန် ရည်မှန်းထားသော မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်တွင်လည်း အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိများ၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စီးပွားရေးသမားများနှင့်
ဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာတလွှားရှိ ဒေတာစင်တာများတွင် ဆာဗာပေါင်း တစ်သန်းကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တနေ့လျှင် ရှာဖွေချက်ပေါင်း တစ်ဘီလီယံကို လက်ခံနေရသည်။ အမေရိကန် အခြေပြု www.google.com သည် အင်တာနက်တွင် လူအများဆုံး ဝင်ရောက်ကြသည့်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး ဂူဂဲလ်ပိုင် ယူကျုနှင့် ဘလော့ဂါတို့
သည် လည်း လူအများဆုံး ဝင်ရောက်သည့်ဆိုက်များဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာမူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံများ တွင် တနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူတရာတွင် တယောက်သာ အင်တာနက်နှင့် လက်လှမ်းမီသည်။
ဂူဂဲလ် ဥက္ကဌ၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် ရည်ရွယ်ချက်မှာ မရှင်းလင်းသေးသော်လည်းသတင်းမီဒီယာကို ပြင်းထန်စွာ နှိပ်ကွပ်သည့်မြောက်ကိုရီးယားနှင့် မတူမည်မှာ သေချာသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သတင်းနည်းပညာ ကဏ္ဍသည်လည်း အရေးတကြီးနေရာက ပါဝင်နေရာ ဂူဂဲလ်အနေဖြင့်မြန်မာ့ဈေးကွက်ကို စိတ်ဝင်စားနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ – ဂူဂဲလ်၏ ဥက္ကဌ မစ္စတာ အဲရစ်ရှမစ် ( Reuters)
This entry was posted on March 12, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ရခိုင်မှ ထွက်ပြေးလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၁၂၆ ဦး မလေးရှားရေတပ် ကယ်ဆယ်
ပြည်တွင်း သတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း
မတ်လ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃
Teluk Bahang ရှိ ရေလုပ်သားများ၏ သတင်းပေးပို့မှုကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံသို့ လှေဖြင့် ၀င်ရောက်လာသော အစာရေစာ ပြတ်လတ်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၁၂၆ ဦးကို မလေး ရှားရေကြောင်း သွားလာမှု ထိန်းသိမ်းရေး အေဂျင်စီ(MMEA)မှ မတ်လ ၉ ရက် စနေနေ့တွင် ကယ်ဆယ်လိုက်သည်။
နေ့လည့် ၂ နာရီခန့်တွင် MMEA မှ အရာရှိများက ထိုလှေငယ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရေများ စိမ့်ဝင်နေသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ လှေငယ်တွင် အသက် ၂၀ မှ ၅၀ အတွင်းရှိ အမျိုးသား ၅၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃၅ဦး၊ အသက် ၂လမှ ၁၂ နှစ် အရွယ်ရှိ ကလေး ၄၀ ဦးတို့ပါဝင်ပြီး ထိုသူများအားလုံးမှာ လွန်ခဲ့သည့် ၃ ရက် က တည်း က အစာရေစာ ပြတ်လတ်နေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မလေးရှားရေကြောင်း သွားလာမှု ထိန်းသိမ်းရေး အေဂျင်စီ(မြောက်ပိုင်း)၏ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ် တန် ကော့ ကွီး(Tan Kok Kwee)က အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များမှာ အသက် ၂ လ မှ ၅၀ နှစ် အတွင်း ရှိကြပြီး လှေထဲတွင် ပြွတ်သိပ်စွာ တွေ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိရန် လွန်ခဲ့သည့် ၂၅ ရက်ခန့်ကတည်းက ပင်လယ်ပြင်ကို ကျော်ဖြတ်ခုတ်မောင်း လာခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
“လှေထဲကို ရေတွေစိမ့်ဝင်နေပါတယ်။ ရေလုပ်သားတွေဆီကနေ သတင်းပေးပို့ချက်ရတဲ့အခါ ကျနော်တို့ KM Nyireh သင်္ဘောကို စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်လူတွေက လှေက အပေါက် ကို ဖာလိုက်ပြီး လှေထဲက ရေတွေကိုလည်း ပန့်တွေနဲ့ စုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။့သူတို့ရဲ့ သင်္ဘောကိုလည်း (ဆွဲသင်္ဘောနဲ့) ဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေကို ဘယ်သူက ခေါ်လာ သလဲ ဆိုတာကို စုံးစမ်း စစ်ဆေးနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်ကတည်းက အစားအစာ ပြတ်လတ်သွားတာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေပြီး၊ မောပန်းနေပုံ ရပါတယ်။ အဲဒီ ရက်တွေမှာ သူတို့ဟာ ပင်လယ်ရေကိုပဲ သောက်ခဲ့ရပါတယ်။” ဟု သူက ဆိုသည်။ ” ဟု MMEA ရုံးခန်းတွင် မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါလှေကို ယမန်နေ့နံနက်က Batu Uban ရှိ ဒေသ ၂ ရေကြောင်းရုံးချုပ်သို့ ဆွဲယူသွားခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်များကိုမူ အစားအသောက်များနှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကာ MMEA မှ စစ်ဆေးမေးမြန်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးလျှင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးသွားမည်ဟု သူက ဆိုသည်။
alaysia Relif Association NGO အဖွဲ့ မှ ရခိုင်မှ ဒုက္ခသည်များ အတွက် ထပ်မံ သွားရောက် လှူဒါန်း
မတ်လ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃
MRA(Malaysia Relif Association) ရဲ့ ဥက္ကဌ ဒါတွတ် ဒေါက်တာ အဗ်ဒူလ် ရာဇတ်ကေချစ်က်(Dato ‘Dr. Abdul Razak Kechik) ဦးဆောင်သည်ှကူညီထောက်ပံရေး အဖွဲ့ တစ်ခုကို ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ မတ်လ ၃ ရက်နေ့က စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ထိုအဖွဲ့သည် အောင်မင်္ဂလာ၊ သဲချောင်း၊ တာပိုင်၊ သက်ကယ်ပြင်၊ ရွှေစေတီ၊ စက်ရုံစုနှင့် မင်းဂံ စသည့် ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ သွားရောက်၍ အကူအညီများပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည် စခန်းများရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၆၀၀ ခန့်သည် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုပ်၊ ပဲ၊ ကြက်သွန်၊ ထင်း စသည့် ထောက်ပံရေးပစ္စည်းများကို ရရှိကြပြီး၊ ကလေးငယ်များ ဆက်လက် ပညာ သင်ကြားစေနိုင်ရန် အတွက် ရွှေစေတီနှင့် သက်ကယ်ပြင် ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ကလေးငယ် ၄၈၀၀ခန့်ကိုလည်း စာအုပ်များ၊ ခဲတံများဝေငှခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကူညီထောက်ပံမှုများ အပြင် MRA အဖွဲ့သည် ရေရှည် ကူညီမှု အစီအစဉ်များအတွက် အခွင့်အလမ်း ရှာဖွေခဲ့ပြီး ဒေသခံအာဏာပိုင် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက်လည်း မျှော်လင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Ref: MRA(Malaysia Relif Association) FB
This entry was posted on March 10, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
Participant historians on international seminar about Arakan history at Mahidol University of Bangkok are unable to provide static calculation of infiltrators and also quiet regarding to establishment of Mrauk Oo dynasty by Mulims.
This entry was posted on March 10, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
International seminar on Rakhine history(Arakan) at Mahidol university on 9-3-2013. Dr Aye chan failed to prove his denial of Rohingya as native of Arakan
International seminar on Rakhine
history(Arakan) at Mahidol university
on 9-3-2013. Dr Aye chan failed to prove
his denial of Rohingya as native of Arakan
This entry was posted on March 10, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇွန် လနှင့်အောက်တို ဘာလများတွင် အကြမ်းဖက်မှု များဖြစ်ပွားပြီးနောက် အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ကမန် မွတ်စလင် ၁၂၀၀၀၀ ခန့်အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ် ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့၏ ဒုက္ခသည်စခန်း များအခြေ အနေဆိုးရွားနေ သည်ကို ကုလသမဂ္ဂမှ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဒုက္ခသည် စခန်းများ သို့သွားရောက်ကြည့်ရှူ စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ယခုအခါ တူရကီနိုင်ငံမှ တန်ဖိုးနည်း အိမ်များကို ဆောက်လုပ်ပေး ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုး ရနှင့် ဆွေး နွေး ညှိနှိုင်း ပြီးနောက် ယမန်နေ့က ရခိုင် အစွန်းရောက် အချို့၏ ဆော်သြ မှုကြောင့် စစ်တွေမြို့ နှင့် အခြား မြို့အချို့ တွင် အိမ်ရာဆောက် လုပ်မှုကို ရပ်တန့်ရန် အတွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ကို အာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိ ဘဲပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်အားမေးမြန်းရာတွင် ၎င်းမှ လူဝင် မှုကြီး ကြပ် ရေး ၀န်ကြီးဌာ နမှ တာဝန်ရှိ သူများကို တရားမ၀င်ခိုး ၀င်နေထိုင်သူရှိ/မရှိ ကိုမေးမြန်း ခဲ့ကြောင်းနှင့် မရှိဟု သိခဲ့ရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အစိုးရ အနေနှင့်မီဒီ ယာများမှတဆင့် သံသယစိတ်များပျောက် သွား ရန်ပြော ဆိုရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနှင့် အင်တာဗျူး အပြည့်အစုံ ကိုအောက် တွင်နားထောင်နိုင် ပါသည်။ ဦးရွှေမောင်နှင့် အင်တာဗျူး ကို တိုက်ရိုက် နားထောင် လိုလျှင် ၂း၄၆ မိနစ်သို့သွားပါ။
This entry was posted on March 8, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
အစ္စရေးအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံရုံးသို့မတင်ရန် ကနေဒါမှ ပါလက်စတိုင်းကို သတိပေး
မတ် ၆ ၊ ၂၀၁၃
အစ္စရေးတို့၏ မူဝါဒအားထောက်ခံသည့် ကွန်ဖရင့်၌ ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက အကယ်၍ ပါလက်စတိုင်းတို့သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ထောက်ခံမှုအသစ်ဖြင့် အစ္စရေးအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံရုံး – The International Criminal Court (ICC) သို့ စွဲချက်တင်မည်ဆိုပါလျှင် ကနေဒါ ထံမှ အကျိုးဆက်ကို တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ကြေငြာပြောကြားသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Baird
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အမေရိကန်-အစ္စရေး လူထုရေးရာကော်မတီ American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) အဖွဲ့မှ ထောင်ချီသည့် ၀ါဒထောက်ခံသူများ နှင့် အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသို့ Johg Baird မှ မိန့်ခွန်းပြောရာ အောက်ပါကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရေးရာအဖွဲ့ကြီးမှာ တွေ့မြင်ကြရတဲ့အတိုင်း – ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှာ တွေ့မြင်ကြရတဲ့ အတိုင်း – အလားတူစွာဘဲ ICC မှာ တွေ့မြင်ကြရတဲ့အတိုင်း ရှေ့ဆက် လှုပ်ရှားမှုတွေကို အလေးအနက်ထားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အစကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ပြီးသားပါ။ ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံရာမှာ ပိုပြီးအရာရောက်အောင် လုပ်ရပါလိမ့်မယ် ”။
အစ္စရေးတို့အပေါ် ၀န်ကြီးချုပ် စတီဗင်ဟာပါ အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ခံမှုကို ထုတ်ဖော်သောအားဖြင့် ပရိသတ်များက Baird ၏ မှတ်ချက် စကားကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ၌ ပါလက်စတိုင်းတို့၏ နိုင်ငံမဲ့မှ နိုင်ငံသစ်ထူရေး ဦးတိုက်တင်သွင်းမှုကို ကနေဒါ မှ ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး၊ အစ္စရေး စိုးမိုးမှုအပေါ် ICC တွင် အတိုက်အခံမပြုရန် ပါလက်စတိုင်းအစိုးရကို သတိပေးထားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလက ပါလက်စတိုင်းအား ယူနက်စ်ကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်းရေးအဆိုကို ကနေဒါမှလည်း ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
ပါလက်စတိုင်းအကြီးအမှူးများက ပါလက်စတိုင်းပိုင်နယ်မြေများအတွင်း တရားမ၀င် အိမ်ယာတိုးချဲ့မှုများ ရပ်တန့်ရေးအတွက် ICC ၌ အစ္စရေးရဲ့ အုပ်ချုပ်ပုံကို မိမိတို့မှ အတိုက်အခံပြု သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာလ၌ကျင်းပခဲ့သော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် ပါလက်စတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မဟ်မူးဒ် အဗ်ဗာ့စ်၏ မိန့်ခွန်းအား “ ကျွန်တော်တို့ထဲက လူအတော်များများကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်သွားစေခဲ့တယ် ” ဟု Baird မှ ဝေဖန်လိုက်ပြီး၊ “ သူဟာ အစ္စရေးကို လက်ကမ်းကောင်း ကမ်းပေးပါလိမ့်မယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအငွေ့ အသက်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ကောင်းဖော်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်၊ သဘောထားကြီးကောင်း ကြီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့စကားထဲမှာတော့ စေတနာထက်သန်မှုကို ကျွန်တော်တို့ မတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး ” ဟု ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပါလက်စတိုင်း၏ အလားအလာကောင်းကို ကနေဒါ၊ အမေရိကန်၊ အစ္စရေး နှင့် နောက်ထပ် နိုင်ငံ ၆ ခုမှ ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့သော်လည်း၊ ညီလာခံအဖွဲ့ဝင် အခြားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၃၈ နိုင်ငံမှ ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသည်။
International news for myanmar‘s photo.
ရွှေ့ လျားနေသော စစ်တပ်ကြီးပါပြီ။ တိုက်ယာဉ် အစင်း ၉၀၊ စစ်သည်ပေါင်း ၅၀၀၀၊ တင့်ကား၊ လောင်ချာ၊ တာပီဒို ပြောမကုန်အောင် စစ်လက်နက် စုံစုံလင်လင် ပါရှိတော့ သူ့ကိုမှ ရွှေ့ လျားနေတဲ့ စစ်တပ်လို့ မခေါ်ရင် အခြား နာမည်မရှိတော့ပါဘူး။
၁၉၉၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက စဆောက်တာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က ရေချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်ဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲတာတို့၊ ဖန်တီးတာတို့ အားလုံးကို တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက မဟုတ်ပဲ အားလုံး အိုင်ဒီယာပေါင်းစပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောနာမည်ကို အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း Ronald Reagan ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ USS Ronald Reagan (CVN-76) လို့ အမည်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တုန်းက သမ္မတဟောင်း Ronald ရှိနေသေးပြီး သက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ သမ္မတကို ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့ ပထမဆုံး သင်္ဘော ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလျံ ကုန်ကျပါတယ်။ အားလုံးကို အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်နဲ့ အစိုးရတို့က ထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ခရီးတစ်ခုသွားဖို့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီကုန်ကျပါတယ်။
အော်ပရေးရှင်း ကောင်းကောင်းမသွားရသေးပါဘူး။ ကောင်းကောင်းဆိုတာ တိုက်ပွဲမဝင်ရသေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ လက်ရှိအချိန်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးသွားရတာတွေချည်း များနေပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဖိလစ်ပိုင်မှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံဒုက္ခသည်ကို သွားရောက်ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ပြီး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောင်းပိုင်းကျတော့ တောင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ စခန်းချပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တော့ ဂျပန် ဆူနာမီနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ခံ ဒေသတွေကို သွားရောက်ကူညီပါတယ်။ နီးစပ်ရာနိုင်ငံများသို့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ်သွားရောက်လည်ပတ် တာမျိုးတို့ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံများသို့ ထောက်ပံ့ရေးအတွက် လည်း သွားရောက်ပြီး စစ်ဘက်အသုံးပြုမှုကတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အနည်းစုမှာတော့ ထည့်သွင်း အသုံးပြုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့အတွက် အကြီးစား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာသာ ပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နျူကလိယ စွမ်းအင်သုံး သင်္ဘောဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ မသေနိုင်သော သင်္ဘောလို့တောင် ပြောစမတ်ပြုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အနည်းဆုံး Life Span ၂၅ နှစ်သက်မှတ်ထားပါတယ်။ နျူကလိယ ဓာတ်ပေါင်းဖို ၂လုံး၊ ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင် ၄ လုံး၊ ပန်ကာ ၄ လုံး တပ်ဆင်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အား စုစုပေါင်းက ၁၉၄ မက်ဂါဝပ် ရှိပါတယ်။ လုံးခြုံရေး အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ရေပေါ်၊ ရေအောက်၊ လေပေါ် ထောက်လှမ်းနိုင်သော ရေဒါအများကြီးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ယင်းရေဒါများ ကလည်း အင်မတန် ကုန်ကျစရိတ် များပါတယ်။ လေယာဉ် တင် သင်္ဘောတစ်စီး (Super Carrier) တစ်ခုအနေနဲ့ တစ်နေရာရာမှာ အတိုက်ခိုက်ခံရ ရင် အားလုံးပျက်ဆီးမှာမို့ လုံခြုံရေးကိုတော့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပစ္စည်းများနဲ့ အသုံးပြု တပ်ဆင်ပါတယ်။ သူတစ်ခါ ခရီးထွက်ရင် တစ်စီးတည်း မထွက်ပါဘူး။ ပတ်ပတ်လည်မှာ စစ်သင်္ဘောများ လိုက်ပါပြီး လေပေါ်မှာ လည်း တိုက်လေယာဉ်နဲ့ ကင်းလေယာဉ်များ လှည့်ပေးရပါတယ်။ အောက် မှာလည်း ရေငုပ်သင်္ဘော အနည်းဆုံး တစ်စီး လိုက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံးသွားနှုန်းက တစ်နာရီ မိုင် ၄၀ ထက်မပိုလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ပေ ၁ ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ သင်္ဘောတစ်စီး ရွေ့ ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လည်း ခရီးနှင်ရပါတယ်။
Super Carrier Ronald နှင့် အနာဂတ် ကမ္ဘာ
အမေရိကန် မှာ ရှိနေတာ Ronald တစ်စီးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့လိုပဲ အင်အားကြီး လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘောကြီးတွေ အမြောက်အများ ရှိပါတယ်။ ယင်း မြောက်များလှတဲ့ စစ် ရေငုပ် သင်္ဘော၊ လေယာဉ် တင်သင်္ဘော၊ နျူကလိယစွမ်းအင်သုံး စစ်သင်္ဘောများကြောင့် အမေရိကန်ဟာ ယနေ့မှာ စူပါပါဝါ ပိုင်ရှင်လို့ ထင်ရှားကျော်ကြားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် စစ်သင်္ဘော၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊ ရေငုပ်သင်္ဘောများ ကြိုးစားတည်ဆောက်နေပေမယ့် အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့အရေအတွက်ကို မှီနိုင်ဖို့ အချိန်ကာလတစ်ခု လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ အနာဂတ်မှာလည်း ယင်ကဲ့သို့ အလားတူ အဆင့်မြင့် နျူကလိယ စစ်သင်္ဘောများတည်ဆောက် ဖို့ ပင်တဂွန်ကို စစ်အသုံးစရိတ်များ ဆက်လက်ချပေးထားတဲ့ အတွက် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စူပါပါဝါကို အမေရိကန်က ပိုင်ဆိုင်နေအုံးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြကြောင်း သိရပါတယ်။
This entry was posted on March 7, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ လူသားစားသော မိန်းကလေး
shared ကို ကွန်း‘s photo.
ဒါဟာ တစ်ကယ့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ လူတွေကို သတ်ဖျက်ပြီး သူ့ရဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားသောက်ရန် အလို့ငှာ သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူမဟာ လူသားစားရခြင်းကို ပိုမိုခုံမင်လာခဲ့ပါတယ်။
သူမဆက်ပြောတာက သူမဟာ သူမရဲ့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်း ညစာစားပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူသားတွေကို ချက်ကြွေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကတော့ ဒါကို လူသားမှန်း လုံးဝမသိခဲ့ကြပါဘူး။
သူမရဲ့ဆွေမျိုးတွေက သူမချက်ထားတဲ့ဟင်းက အရမ်းကောင်းကြောင်း ဒါပေမယ့် သူမဘာအသားကို အသုံးပြုထားလဲ ဆိုတာကတော့ မသိကြောင်း ပြောပြပါသည်။ သူမဟာ နောက်ဆုံး သူမယောက်ျားကိုတောင် သတ်ပြီး စားသောက်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ သူမဟာ ဖိလစ်ပိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတော့တယ်။
108 Rohingyas rescued in India
Wednesday, March 06, 2013 boat people, India, Myanmar, Rohingya
Rohingya while resting releasing tired and temporarily housed in shelters House Immigration Punteut, Lhokseumawe. (Doc – Care)
Indian coast guards have rescued 108 Rohingyas off the coast of the country’s eastern Andaman archipelago,awebsite in the islands reports.
The ‘Andaman Sheekha’ said that two coast guard ships, C-145 and Aruna Asaf Ali, rescued these Rohingyas from an unmanned barge ‘Ganpati’, which was tugged away from Myanmar to Mumbai by ‘Tug Star Jakarta’.
Some officials of Indian company Punj Llyod drew the attention of the coast guards about the presence of some 15 unidentified people in the unmanned barge and the presence of some boats in its vicinity on the evening of 28th Feb, the website said.
On receipt of the information, Interceptor Boat C-145 under the command of Coast Guard Commandant SR Nagendrgan was pressed into action.
“It sailed out from Diglipur and intercepted Tug Star Jakarta at 9:00pm Indian time. Then the Coast Guards boarded the barge Ganpati,” the website said.
They found 108 Rohingyas onboard Ganpati. “They have been on sea since 15th Feb and without food and water foraweek. Their condition was critical due to severe dehydration and starvation and required immediate medical aid and evacuation,” the website reported.
A three-year-old boy in the group had died and was given burial at sea, it said.
“Considering the urgency of rescuing large number of people, ICGS Aruna Asaf Ali under the command of Comdt MS Gill, operating 175 nm away, was also directed to rush for rendering assistance. The officers and men of the Coast Guard ships C-145 and Aruna Asaf Ali battled rough seas during the overnight operation and successfully rescued all the 108 Myanmarese (Rohingyas) from the barge Ganpati. The rescued Myanmarese were provided food, water and first Aid by Coast Guard ships,” the ‘Andaman Sheekha’ reported.
Hundreds of Rohingya Muslims trying to flee their native Arakans (now Rakhine state) of Myanmar or their makeshift camps in Bangladesh have been nabbed or rescued in recent weeks in Malaysia, Indonesia, Thailand and even Sri Lanka.
The Rohingyas try to infiltrate into south-east Asian countries to startanew life, away from their troubled homeland, where ethnic riots and state persecution has put them inatight spot.
လာမည့် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ယူရို ၆ ဒသမ ၅ သန်း ကူညီထောက်ပံ့ရန် လျာထားကြောင်း
လာမည့် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ယူရို ၆ ဒသမ ၅ သန်း ကူညီထောက်ပံ့ရန် လျာထားကြောင်း ဖင်လန်နိုင်ငံ သမ္မတ H.E.Mr.Sauli Niinist နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ မတ် ၁ ရက်က ဖင်လန်နိုင်ငံ ဟယ်လ်စင်ကီမြို့ရှိ သမ္မတအိမ်တော်၌ ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဖင်လန်သမ္မတက ပြောကြားလိုက်သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဖင်လန်နိုင်ငံ သမ္မတက မိမိနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို မိမိတို့ အားပေးကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားမှုများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးဖို့ ကြိုးစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး ဆက်သွယ်မှု အတွက်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် သတ္တုတွင်းထွက်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း မိမိတို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လည်း အကူအညီ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေ့ဆက်ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း ဖင်လန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ ဆက်ဆံရေးမှာ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ပြည့်တော့မည်ဖြစ်၍ ရှည်လျားသည့် သမိုင်းကြောင်း ဆက်ဆံရေးကို မိမိတို့ အနေဖြင့် အလေးထားပါကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံတို့သည် နိုင်ငံရေး စနစ်ချင်း မတူညီမှုနှင့် အခြားအခြေအနေ တို့ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှေးကွေးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း ဖင်လန်နိုင်ငံနှင့် တူညီသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာ ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလို ဖင်လန်နိုင်ငံ သမ္မတကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အားပေးထောက်ခံ ကူညီပေးသွားမည့်အပေါ် များစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများစွာရှိရာ ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ကုမ္မဏီများ အနေဖြင့် လာရောက်ရင်းနှီးနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးမှုကို မြန်မာနိုင်ငံ ပိုမိုတိုးတက်စေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် နှစ်ဦး ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် ဥရောပ ငါးနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ သမ္မတ သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပြည်ပခရီးစဉ် ၁၉ ခု သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဥရောပ ငါးနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် နော်ဝေနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကျန်သုံးနိုင်ငံသို့ ဆက်လက်သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
This entry was posted on March 6, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ထူးးခြားသတင်း – နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကုသပျောက်ကင်း ခဲ့ကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်များ ပြောကြား …
နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကုသပျောက်ကင်းခဲ့ကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်များ ပြောကြား
အမေရိကန်နိုင်ငံ မစ္စစ္စပီပြည်နယ်တွင် မွေးရာပါ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာရှင်နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ပထမဆုံးအကြိမ် အောင်မြင်စွာ ကုသနိုင်ခဲ့ကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်များက မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့သည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကို ယခုကဲ့သို့ ကုသနိုင်ခဲ့မှုက မွေးရာပါ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကလေးငယ်များကို ကုသရာတွင် တိုးတက်မှု ရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သုတေသန ပညာရှင်များက စောစီးစွာ ကုသနိုင်မှုနှင့် (ယခုကုသမှုတွင်မွေးဖွားပြီး နာရီ ၃၀ အတွင်း) အေအာဗီ (antiretroviral therapy)ဆေးသုံးမျိုးသည် ကုသမှုရလဒ်အတွက် အဓိက ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အရေးကြီးသော နည်းပညာ ကွဲလွဲချက်တစ်ခုမှာ ယခုကုသပျောက်ကင်းမှု သည် အလုံးစုံ ကုသပျောက်ကင်းမှု မဟုတ်ဘဲ “functional cure” ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ ကုသပျောက်ကင်းမှုဖြစ်ကြောင်း သုတေသန ပညာရှင်များက အခိုင်အမာ ပြောကြား ခဲ့သည်။
“functional cure” ဆိုသည်မှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဗိုင်းရပ်စ် အနည်းငယ်သာ ရှိနေပြီး ရေရှည်ကုသမှု မလိုအပ်တော့ဘဲ ပုံမှန်ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုများကသွေးအတွင်းတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေမှုကို မသိ ရှိနိုင်ပေ။ ယခုတွေ့ရှိမှုများကို အတ္တလန္တာတွင် ပြုလုပ်သည့် Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections ကွန်ဖရင့် တွင် ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကို အပြည့်အ၀ ပျောက်ကင်းကုသခဲ့သူမှာ Berlin patient ဟု သိကြသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား တင်မိုသီဘရောင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝအတိုင်း အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ခံနိုင်ရည် ရှိသော သွေးလှူရှင်တစ်ဦးထံမှ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးမှုကို ခံယူပြီးနောက် ၅ နှစ်အကြာတွင် ဘရောင်းသည် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့် သွေးကင်ဆာရှိ ပျောက်ကင်းသွားခဲ့သူဟု သတ်မှတ်ခံ ရသူ ဖြစ် သည်။
အမည်မဖော်ပြထားသော မိန်းကလေးငယ်သည် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီရှိသူ မိခင်မှ မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မိခင်သည် သူမကို မမွေးဖွားမီအထိ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီအတွက် ကုသမှု မခံယူခဲ့ပေ။ “ကလေး ကို ရောဂါကူးစက်မှုကနေ ကာကွယ်လိုတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်းမှာ မိခင်ကို ကုသဖို့ ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေး မရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု မစ္စစ္စပီ တက္ကသိုလ်ဆေးပညာဌာနမှ အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗွီ ကုသမှု ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဝန် ဟန်နာဂေးက ပြောကြားခဲ့သည်။ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားသည့် အခြေအနေကြောင့် ခြောက်ပတ်အတွင်း အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ သွေးအဖြေ မရခင်အထိ ဆေးအနည်းငယ်သာ ပေးခဲ့ရသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ကလေးငယ်တွင် ပိုးကောင်ရေ တဖြည်းဖြည်းခြင်းကျဆင်းခဲ့ပြီး မွေးဖွားပြီးနောက်၂၉ ရက်အကြာ တွင် အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗွီကိုစစ်ဆေး မတွေ့ရှိနိုင်တော့ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကလေးငယ်ကို ၁၈ လထိ ကုသမှုပေးခဲ့ပြီး ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ၁၀ လခန့် အဆက် သွယ်ပြတ် သွားခဲ့ပြီး ထိုကာလအတွင်းကလေးငယ်သည် အေအာဗီဆေး သောက်သုံးခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင်သုတေသနပညာရှင်များက သွေးအကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ခဲ့သော်လည်း အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီရှိကြောင်း မတွေ့ရတော့ပေ။
ယခုကဲ့သို့ ကုသနိုင်ခဲ့မှုက မွေးကင်းစကလေးများတွင် အေအာဗီကုထုံး ချက်ခြင်းပေးနိုင်ပါက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်း အလားအလာ တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် မျှော်လင့် ချက်များ မြင့်မား လာပြီဟု သုတေသနပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
This entry was posted on March 4, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
Infront of Thein Sein Rohingya Demonistration in Norway
This entry was posted on March 3, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
အိုဘားမားရဲ့ မြန်မာပေါ်လီစီကို ပြောင်းဖို့ တောင်းဆို (BBC)
Adipati Live shared M-Media‘s photo.
မတ်လ ၁ ၊ ၂၀၁၃မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ် ပြုမူမှုတွေ၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ဦးတည်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေလို့ ဖေါ်ပြပြီး အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ပြောင်းဖို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မီတီ ကြားနာမှုမှာ United to End Genocide လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း တွန်အင်ဒရူးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေဟာ အမေရိကန်၊ ယူကေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ တစိုက်မတ်မတ် ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ ပြောင်းလဲလာလို့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေ လျော့ပေးတာကို လက်ခံပေမယ့် သံတမန်ရေး၊ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး ဖိအားအားလုံကို လျော့ချတာကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အနိမ့်ဆုံး မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ အရပ်သားတွေကို သတ်ဖြတ်မှု၊ လယ်မြေသိမ်းမှုတွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းတာမျိုး၊ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်ပေးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေက အခြေခံကျတဲ့ အချက်တွေကို ပြင်ဆင်တာမျိုး နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို လုပ်မှသာ လက်ရှိမူဝါဒကို ဆက်ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနှစ် နှောင်းပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒကို ကွန်ဂရက်က ပြန်သုံးသပ်ရာမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ထည့်စဉ်းစားပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား မူဝါဒချဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
This entry was posted on March 2, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ရိုဟင်ဂျာ ၆၀ ကျော် လှေမျောပေါ်မှ အင်ဒိုနီးရှား တံငါသည်များ ကယ်ခဲ့ရ
ယခု သီတင်းပတ် အတွင်း ဒုတိယ အကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခိုလှုံခွင့် တောင်းရန် လာရောက်ကြသော ရိုဟင်ဂျာ ၆၃ ဦးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ စူမတြားကျွန်း ပင်လယ် ကမ်းခြေတွင် စက်မပါသည့် သစ်သား လှေမျောပေါ်မှ တွေ့ရှိ ကယ်ဆယ်ခဲ့သည်။ —
မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် တင်ပြ
၂၂ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံအတွင်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းနိုင်ငံတွေက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို တင်ပြခဲ့ကြတာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေ တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံအတွင်း အခုလို ပြောကြားခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဟာ ဘယ်လို တိုးတက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါသလဲ။ ဒီအခြေအနေ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုရန်နိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုးတက် မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဂျနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၂၂ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂလူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီ ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံအတွင်းမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမောင်ဝေ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ တိုးတက်မှုတွေထဲမှာ ပထမဆုံးတခုကတော့ နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တိုးတက်မှုတွေ အတော်များများရှိခဲ့တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့နဲ့ အတူ အနီးကပ်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့ဟာ ရခိုင် နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အပါအ၀င် ရေနဲ့မိလ္လာလိုမျိုး အရေးပါပြီး အခြေခံကျတဲ့ အကူအညီတွေကို ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် တိုးတက်မှုတခုကတော့ အခုဆိုရင် ICRC ဟာ အကျဉ်းထောင်တွေကို ပြန်ပြီးတော့ သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာအစိုးရက လူ့အခွင့်အရေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် လုပ်ဖို့ကတိပြုခဲ့တဲ့ အထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားကိစ္စ၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ဖို့ကိစ္စ၊ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေမူကြမ်း ပြင်ဆင်ဖို့ စတာတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတခုလို ရှုမြင်ထားကြတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူကအခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျန်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ သူတို့ကိုချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကို ပြန်လည် စဉ်းစား ဖို့လည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအရေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ စိစစ်ပြီး အဲဒီလူတွေ ကို ပြန် လွှတ်ပေးဖို့အတွက် ကော်မတီကိုလည်း ဖွဲ့ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေမူကြမ်းကို ရေးဆွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဟာလည်း မြန် မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေရဲ့ တိုးတက်မှုတခုဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေမူကြမ်းကို ရေးဆွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ၊ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လုပ်နေတာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နောက်ထပ် တိုးတက်မှု တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို သမ္မတထံကို တင်သွင်းထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒီဥပဒေကို ပြဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက် လွှတ်တော်ကို တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေကို ပြဌာန်း ပြီးပြီဆိုရင်တော့ လူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုပြီးတော့ရှိလာပြီး ထိထိရောက်ရောက်လုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် နေ့က ဂျနီဗာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီရဲ့ နှစ် ပတ်လည် ညီလာခံအတွင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်ဝေ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာတယ်လို့ဆိုနေပေမယ့်လည်း ဧရာဝတီတိုင်း၊ မအူပင်မြို့နယ်က မလက်တိုကျေးရွားမှာတော့ လယ်သမားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုကို လုံခြုံရေးရဲအာဏာပိုင်တွေက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အာဏာပိုင်တွေဘက်က အမျိုးသမီးတွေ အပါအ၀င် လယ်သမားတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ် အိုဟေးကင်တားနားကလည်း တုန်လှုပ်မိတယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အခြေအနေတွေနဲ့ အလာတူးဖြစ်နေတုန်းပဲဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကျရင်တော့ မစ္စတာ ကင်တာနားဟာ မအူပင်ကလယ်သမားဆန္ဒပြမှု ပဋိပက္ခအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တာတွေကို လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကို တင်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
This entry was posted on March 2, 2013, in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ မွတ်စလင်များ ကဏ္ဍ
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာ
ကိုရီးယားစစ်ပွဲပြီးသည့်နောက် မကြာမီပင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အစ္စလာမ့်အယူဝါဒနှင့် စတင်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မွတ်စ်လင်မ် လူဦးရေမှာ တစ်စစဖြင့် တိုးတက်များပြားလာကြ၏။ ကိုးရီးယားလူမျိုး သာမက အခြားနွယ်ဖွားတို့ပါဝင်နေသော မွတ်စ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ဆိုးလ်မြို့တော်တွင် အဓိကအခြေပြုနေပြီး ၄င်း၌ ၂၀ ရာစုလက်ရာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ခု ရှိသည်။ ထိုကျောင်းတော်အား မလေးရှား အစ္စလာမ့် သာသနာပြု လုပ်ငန်းနှင့်အခြား အစ္စလာမ်နိုင်ငံများမှ ရန်ပုံငွေဖြင့် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ကိုရီးယားတိုင်းရင်းသား မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် လူဦးရေသုံးသောင်းထက် မပိုသေး။ တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း(အီရတ်)၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားမှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတို့သည် ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ နှစ်များအတွင်း ရောက်ရှိလာသည်။ ယင်းရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားတို့အများစုမှာ မွတ်စ်လင်မ်များဖြစ်ကြပြီး တောင်ကိုရီးယား၌ အခြေစိုက်နေထိုင် သူများလည်း ရှိသည်။ ထိုသူများကိုပါထည့်တွက်ပါက စုစုပေါင်း မွတ်စ်လင်မ် လူဦးရေပမာဏသည် ၃၅၀၀၀ ထက်မနည်း ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထူးခြားထင်ရှားမှု မရှိလှချေ။ (မွတ်စ်လင်မ်များ မရှိသလောက်ဟု ယူဆရသည်)။ သာသနာ့ရေးရာ သီးသန့်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များကို ဟုတ်တိပတ်တိ ဟူ၍ မတွေ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အေဒီ ၇ ရာစုအလယ် နောက်ပိုင်းကာလများအတွင်း ခလီဖဟ်နယ်မြေမှ မွတ်စ်လင်မ် ကုန်သည်များသည် တရုတ်ပြည်သို့ဖြတ်သန်း သွားရောက်ရာ လမ်းရှိ ကိုးရီးယားပိုင်နက်သုံးခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သော စီလာနှင့် အဆက်အသွယ် ရှိခဲ့ကြသည်။ အေဒီ ၇၅၁ ခုနှစ်တွင် Goguryeo မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်သူ Gao Xianzhi ဆိုသူ တန်မင်းဆက်၏ တရုတ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးသည် အဗ္ဗာစစ်ခလီဖဟ်အား ဆန့်ကျင်သည့် Talas စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲသည်။ သို့သော် အနိုင် မရခဲ့ချေ။ အရှေ့အာရှထွက်သမိုင်းကျမ်း မဟုတ်သော အေဒီ ၉ ရာစုအလယ်မှ Ibn Khurdadbih ရေးသားပြုစုခဲ့သည် General Survey of Roads and Kingdoms စာအုပ်၌ ကိုးရီးယားအကြောင်းဖော်ပြချက်ကို အစောဆုံး တွေ့ရသည်။
အေဒီ ၉ ရာစုမတိုင်မီက “ စီလာဒေသပေါင်းစည်းရေး ” ကာလအတွင်း ကိုးရီးယားသို့ ပါးရှန်းနှင့် အာရဗ် ရေကြောင်းခရီးသည်များ၊ ကုန်သည်များနှင့်အတူ အစ္စလာမ်သာသနာရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ အေဒီ ၉ ရာစုမှ ပါးရှန်းမွတ်စ်လင်မ် စွန့်ဦးဖွေရှာသူနှင့်ပထ၀ီဝင်ဗေဒပညာရှင် Ibn Khurdadhbih အပါအ၀င် မြောက်များစွာသော မွတ်စ်လင်မ်ပထ၀ီဝင်ဆရာများ၏အဆိုအရ ယင်းခရီသွားကုန်သည်အမြောက်အများတို့သည် ကိုးရီးယားဒေသ၌ ဓားမဦးချ အခြေစိုက်ကာ မွတ်စ်လင်မ်ရွာများ တည်ဆောက်နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုထား၏။ ထိုအခြေချနေထိုင်သူများအနက် အီရတ်မှ လာသူများ မနည်းလှကြောင်း အချို့မှတ်တမ်းများက ဖော်ပြသည်။ အခြားမှတ်တမ်းအချို့ကမူ ၄င်းတို့မှာ အာလာဝီ ရှီအဟ် ဂိုဏ်းခွဲမှ လူပေါင်းများစွာတို့သည် ကိုးရီးယားဒေသတွင် အခြေစိုက်ခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်။ စီလာ၌ရှိသော အရှေ့အလယ်ပိုင်းသားမွတ်စ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပါးရှန်းလူမျိုးတို့၏စရိုက်သဘာဝများ ထင်ရှားစွာရှိခဲ့သည်ဟု အခြားဖော်ပြမှုက ဆိုသည်။ နောင်သောအခါ မွတ်စ်လင်မ်အမြောက်အများမှာ ကိုးရီးယားတို့နှင့် သွေးနှောခဲ့ကြသည်။ မွတ်စ်လင်မ်ကမ္ဘာနှင့် အဆက်ပြတ်နေသည့် ကိုရီးယား၏နယ်မြေအနေအထားကြောင့် အချို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ လည်းကောင်း၊ အချို့မှာ နတ်ကိုးကွယ်မှုဝါဒသို့လည်းကောင်း ကူးပြောင်းသွားကြသည်။
မွတ်စ်လင်မ်ကမ္ဘာနှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အကြား ကုန်သွယ်ရေးဆက်စပ်မှုမှာ Goryeo မင်းဆက် အောင်နိုင်စိုးမိုးခဲ့သည့် ၁၅ ရာစုနှစ် တစ်လျှောက်၌ ပြန်လည် သက်ဝင်လာသည်။ ဆက်လက်၍ အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ဖျားပိုင်းမှ မွတ်စ်လင်မ် ကုန်သည် အများအပြားတို့ ကိုရီးယားတွင် အခြေချနေထိုင်ပြီးနောက် မွတ်စ်လင်မ် မိသားစုများ ပေါက်ဖွားလာကြသည်။ Toksu ကျေးရွာမှ ကိုရီးယားမူရင်းတိုင်းရင်းနွယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Chang မိသားစုကြီးက မိမိတို့မှာ မွတ်စလင်မ် အဆက်အနွယ်များဖြစ်ကြကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ တရုတ်ပြည်မှ တရုတ်မွတ်စ်လင်မ် (ဟွေလူမျိုးစု) အနွယ်အချို့ကလည်း Goryeo မင်းဆက်ကာလ၌ ထပ်မံရောက်ရှိ နေထိုင်မှု ဖြစ်လာသည်။ ၁၁၅၄ ခုနှစ်၊ အာရဗ်လူမျိုး ပထ၀ီဝင်ဗေဒပညာရှင်ကြီး Muhammad al-Idrisi ရေးဆွဲသော Tabula Rogeriana. အမည်ရှိ ကမ္ဘာ့မြေပုံတွင် ကိုရီးယားဒေသကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရှေးအကျဆုံး ကိုးရီးယားမြေပုံမှာ အစ္စလာမ့်ပထ၀ီ ဆရာများ၏ကြိုးပမ်းမှုများမှ အနောက်တိုင်းဒေသ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအားဖြင့် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဥဂါးရ်လူမျုိုးစုတို့နှင့်လည်း အလွန်ရင်းနှီးစွာ ပတ်သက်ခဲ့သော သာဓကအချို့ရှိနေသည်။ ကိုရီးယားစကားရှိ အစ္စလာမ့်အသုံးအနှုန်း၌ ဟိုးကျို /ဟွေကျောက် (회교, 回敎) ဟူ၍ တွေ့ရသည်။ ၄င်းမှာ ဥဂါးရ်လူမျိုးစုအမည်၏ရှေးအသုံးဖြစ်သည့် ဟွေဟွေ့ (回紇), ဟူသော တရုတ်ဝေါဟာရမှ ဆင်းသက်သည်။ Goryeo ခေတ်နှောင်းပိုင်းအတွင်း Gaeseong နေပြည်တော်၌ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များစွာ ရှိခဲ့သည်။ ကိုးရီးယား၌ မွန်ဂိုများ အုပ်စိုးစဉ်ကာလ တစ်လျှောက်တွင်လည်း မွန်ဂိုတို့သည် ဥဂါးရ်တို့အား အထူး အားထားခဲ့ရသည်။ ဥဂါးရ်တို့၏ စာပေစကား နှင့်အတွေ့အကြုံများက ကုန်သွယ်ရေး နယ်ပယ်များ၌ သြဇာလွှမ်းမိုးနေသဖြင့် မွန်ဂိုအင်ပါယာကျယ်ပြန့်ရေးအတွက် အသုံးချနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားတိုင်းရင်း မျိုးနွယ်စုများအနက် အပြီးပိုင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် ဥဂါးရ်တို့မှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားသည့် မျိုးစု ၂ စု အနည်းဆုံးရှိနေသည်။
ကိုရီးယားသို့ရွှေ့ပြောင်းလာသော ဗဟိုအာရှသားတစ်ဦးသည် King Chungnyeol ထံသို့ ဆက်သထိမ်းမြားစေခဲ့သော မွန်ဂိုမင်းသမီး၏ ကိုယ်ရံတော် ဖြစ်သည်။ ထိုသူ၏ မူလအမည်မှာ ဆမ်ဂါ ဖြစ်သော်လည်း ကိုရီးယားကို အမိမြေဟုသတ်မှတ်လိုက်သည့်နောက် Jang Sunnyong ဟူသည့် ကိုရီးယား အမည်ကို ခံယူခဲ့သည်ဟု Goryeo သမိုင်းမှတ်တမ်းများက ဆိုသည်။ Jang သည် ကိုးရီးယားသူနှင့်လက်ဆက်ခဲ့ပြီး သူ၏မျိုးနွယ်မှာ Deoksu Jang ဟူ၍ အမည်တွင်လာသည်။ ရာစုနှစ်များစွာ ထိုမျိုးဆက်ထဲမှ များပြားလှသည့် အရာရှိကြီးများ၊ ကွန်ဖြူးရှပ် ၀ါဒ ပညာရှင်များ ထွန်းပေါ်ခဲ့သည်။ မျိုးဆက် ၂၅ ဆက်ရောက်သည့်အခါတွင် သူ၏မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ကိုရီးယားလူမျိုးမှာ ပမာဏ သုံးသောင်းအထိ ဖြစ်လာသည်။ ၄င်းတို့၏ ဘိုးဘေးကြီး Jang Sunnyong မှာ ကိုးရီးယား လူမျိုးစစ်စစ် မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်း သိမှတ် လက်ခံကြသည်။ ၄င်းသည် အာရဗ်မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဟု အများစုက ယူဆထားသည်။ သို့ရာတွင် ယင်း မျိုးနွယ်စု၏အစဉ်အလာဓလေ့ထုံးတမ်းများ၌ အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထောက်အထားကိုမူ မတွေ့ရချေ။ အလားတူ စွာ နောက်ထပ် ဗဟိုအာရှသား တစ်ဦး၏ဖြစ်စဉ်လည်း ရှိ၏။ ဥဂါးရ် လူမျိုးဟုယူဆရသော Seol Son အမည်ရှိ ဗဟိုအာရှသားတစ်ဦးသည် မွန်ဂိုတို့၏ ယွမ်မင်းဆက်နှောင်းပိုင်း ဗောင်းထုပ်နီတော်လှန်ရေး – Red Turban Rebellion ဖြစ်ပွားစဉ် ကိုရီးယားသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာသည်။ သူလည်း
ကိုးရီးယားသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ Gyeongju Seol ဟူသော မျိုးရိုးအမည်ကိုခံယူခဲ့ရာ ယခုအခါ သူ့မျိုးဆက်ဦးရေသည် ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသော်လည်း ၄င်းတို့အတွင်း မွတ်စ်လင်မ့် အငွေ့အသက်များကို ထူးထူးခြားခြား မတွေ့မြင်ရချေ။
Joseon ခေတ်ဦးပိုင်းတွင် တရုတ်ရိုးရာပြက္ခဒိန်များအစား ထူးခြားမှန်ကန်မှုရှိသော အစ္စလာမ့် ပြက္ခဒိန်ကို အစားထိုးလက်ခံလာကြသည်။ ၁၅ ရာစုနှစ်၊ Joseon Dynasty မင်းဆက်၊ Sejong the Great ဘုရင် လက်ထက်တွင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ့်နက္ခတ်ဗေဒနှင့် တရုတ်နက္ခတ် ပညာနှစ်ရပ်ကိုပေါင်းစပ်၍ ကိုးရီးယားဘာသာ စကားဖြင့် ပြန်ဆိုထားသည့် သင်ရိုး – Huihui Lifa ကို သင်ကြားစေခဲ့သည်။ ထိုဘာသာရပ်မှာ ၁၉ ရာစုဦးပိုင်းအထိ အစဉ်အလာကြီးခဲ့သည်။
သို့တစေ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ နယ်မြေဒေသ နှင့် နိုင်ငံရေးအနေအထားမှာ ထီးတည်းဖြစ်နေသဖြင့် Joseon ခေတ်ကာလအတွင်း အစ္စလာမ်မှာ ပျောက်ကွယ် တိမ်ကောသွားခဲ့ပြီး ၂၀ ရာစုအတွင်းမှာမှ ပြန်လည် ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Manchuria နယ်၌ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော ကိုရီးယားတို့သည် အစ္စလာမ်နှင့် ထပ်မံထိစပ်မှုရှိရာမှ လက်ရှိခေတ်ကာလ၏ ပထမဆုံး ကိုရီးယားမွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုရီးယားတိုင်းရင်းမွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ရှေးဦးမှတ်တမ်း၌ ၄င်းတို့သည် Manchuria နယ်တွင် ၁၉ ရာစုကပင် ကိုယ်ပိုင် မွတ်စ်လင်မ် လူ့အစုအဝေးကြီး တစ်ရပ်အဖြစ် ထင်ထင်ရှားရှား ရပ်တည်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ၄င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် Manchuria နယ်ရှိ မြို့ကြီးများ၌ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသော ဗဟိုအာရုကုန်သည်မျိုးဆက်များ ဖြစ်ကြသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာကို ပထမဆုံးလက်ခံ သက်ဝင်ကြသော တိုင်းရင်း ကိုရီးယားများ ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကိုးရီးယားစစ်ပွဲပြီးသည့်နောက်မှာမှ ကိုရီးယားတွင် အစ္စလာမ်သည် သိသာစွာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာသည်။ စစ်အတွင်းဝယ် ကိုးရီးယားတို့ကို လာရောက်ကူညီခဲ့သည့် တူရကီစစ်ကူအားဖြင့် အစ္စလာမ် နှင့် ကိုးရီးယား နီးစပ်လာခဲ့ချိန်ကတည်းက ကိုရီးယား၌ အစ္စလာမ်သည် ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန် ဖွံ့ဖြိုး ကြီးထွားလျက် ရှိနေပေသည်။ နယ်ခံတိုင်းရင်း ကိုရီးယားမွတ်စ်လင်မ်တို့ဦးရေမှာလည်း အတန်အသင့် တိုးပွားလာခဲ့သည်။
၂၀ ရာစုမှ တစ်ကျော့ပြန် ထိတွေ့မှု
အီရတ်စစ်မျက်နှာသို့ သွားရောက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြသော ကိုရီးယားစစ်သား ၃၇ ယောက် အစ္စလာမ် သာသနာသို့ ကူးပြောင်းဝင်ရောက်လာစဉ် (၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလ)
ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်း တူရကီနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ တာဝန်ပေးချက် အရ တောင်ကိုးရီးယားသို့ စစ်ကူ တပ်သားများစွာ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ၄င်းကို တူရကီပေါင်းကူး တပ်ဖွဲ့ Turkish Brigade ဟု ခေါ်ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် စစ်မြေပြင်၌ ပါဝင်တိုက်ခိုက်သလို လူသားချင်းစာနာမှု လုပ်ငန်းများ၊ စစ်ဒဏ်ခံမိဘမဲ့ ကလေးသူငယ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကြီးစွာ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြ၏။ စစ်မက်ကာလပြီးဆုံး၍ မရှေးမနှောင်းတွင် တူရကီအချို့သည် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲဝင်များ အဖြစ် တောင်ကိုရီးယား၌ စခန်းချကြရသောအခါ ကိုရီးယားတို့ထံ အစ္စလာမ် အကြောင်း ဖြန့်ချိပို့ချကြသည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် လက်ဦး မွတ်စ်လင်မ်သစ်လွင်တို့မှ ကိုရီးယားမွတ်စ်လင်မ် ရပ်ဝန်းကိုထူထောင်၍ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် တစ်ခုကို ပထမဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကိုရီးယား မွတ်စ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်း ကြီးထွားလာသည်၌ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ကိုးရီးယား မွတ်စ်လင်မ်သမဂ္ဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဆိုးလ်မြို့တော်၌် ဗလီဝတ်ကျောင်းကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် မလေးရှားအစိုးရမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃၀၀၀ ကူညီပံ့ပိုးသည်။ သို့ရာတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြဿနာကြောင့် အစီအစဉ် လွဲချော် ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ တောင်ကိုးရီးယား သမ္မတနိုင်ငံသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းပြည်များနှင့် စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များဖြစ်လာသော ၁၉၇၀ နှစ်များတွင်မှ အစ္စလာမ်သာသနာ အပေါ် တိမ်းညွှတ်မှု ပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေသည့် ကိုရီးယားအချို့ အစ္စလာမ်ကို လက်ခံသက်ဝင်ခဲ့ပြီး၊ လုပ်သက်စာချုပ် သက်တမ်းစေ့၍ ကိုးရီးယားသို့ ပြန်လာရာတွင် တိုင်းရင်းမွတ်စ်လင်မ် ဦးရေများစွာကို ကျားကန်ပေးခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဆိုးလ်မြို့တော်၏ Itaewon ဆင်ခြေဖုံး အရပ်ဝယ် ဆိုးလ်ဗဟိုမြို့မ ဗလီကြီးအား ၁၉၇၆ ခုနှစ်၌ အပြီးသတ် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ Busan, Anyang, Gwangju, Jeonju, Daegu နှင့် Kaesong မြို့များတွင်လည်း ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ ရှိနေလေပြီ။
တောင်ကိုရီးယားမှ ဟလာလ် စားသောက်ကုန် အရောင်းဆိုင်တခု
ကိုရီးယားအစ္စလာမ်တက္ကသိုလ်အကြီးအမှူး Lee Hee-Soo (Yi Hui-su) ၏အဆိုအရ တောင်ကိုးရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၌ စာရင်းရ မွတ်စ်လင်မ် ဦးရေမှာ လေးသောင်းခန့် ရှိပြီး၊ အစ္စလာမ့်နည်းကျ ပီပြင်စွာ ဘ၀တည်ဆောက်နေသူ များမှာ တစ်သောင်းခန့်ရှိသည် ဟု သိရှိရသည်။
“ မင်းသား စုလ်တာန်ဗင်န်အဗ်ဒုလ်အဇီးဇ် ပင်မကျောင်း ” အမည်ဖြင့် အစ္စလာမ်အခြေခံပညာကျောင်း တစ်ကျောင်းကို ကိုရီးယား မွတ်စလင်မ်များ၏ သာသနာ့ပညာ အထောက်အကူ အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ တွင် တရားဝင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းအဖြစ် မိမိတို့မှ ဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း ကိုရီးယားမွတ်စ်လင်မ်ဖောင်ဒေးရှင်းက ဆိုသည်။ ယဉ်ကျေးမှုစင်တာတစ်ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်းများသာမက တက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအထိ စီစဉ်ထားသည်။ ဆိုးလ်၌ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ Abdullah Al-Aifan မှ ယင်းဖောင်ဒေးရှင်းအား ဆော်ဒီအာရေဗျ အာဏာပိုင်အစိုးရ ကိုယ်စား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသိန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ထိုကျောင်း မတည်ထောင်မှီက “စုလ်တာန်ဗင်န်အဗ်ဒုလ်အဇီးဇ် မဒ်ရဆဟ် ” အမည်ဖြင့် ၁၉၉၀ နှစ်များအတွင်း ကလေးငယ်များကို အရဗီ၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှု သင်ကြားပေးနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
မိမိတို့၏ မတူကွဲပြားသော ဘ၀နေဟန်က လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ အခြားသူများထက် တမူထူးခြားနေခြင်းမျိုး မရှိဟု ကိုးရီးယား မွတ်စ်လင်မ် များစွာမှ ပြောကြားသည်။ သို့သော်ငြား ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ၉/၁၁ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု၏နောက်တွင် မလိုလားခံရမှုများရှိလာကြောင်း သူတို့မှ ခံစားမိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ရုပ်သံဌာနတစ်ခုဖြစ်သော Arirang TV မှလည်း အိမာမ် Hak Ap-du ( ဟပ်က် အဗ်ဒူးဟ် ) နှင့် ကိုးရီးယားရှိ အစ္စလာမ်အကြောင်းကို ၉ မိနစ်စာ အစီရင်ခံတင်ဆက်မှု ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Korea မှ ဖော်ပြချက်ကို M-Media မှ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
wiki update date (2-3-2013)
Baker, Don (Winter 2006). “Islam Struggles foraToehold in Korea”. Harvard Asia Quarterly. Retrieved 2007-04-23.
မြန်မာနိုင်ငံသား မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းနဲ့ နောက်ထပ် ၃ ဦးကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့ခင်းက တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ခွန်းမင်မှာ ဆေးထိုးပြီး သေဒဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၃ ယောက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံသား တယောက်၊ လောနိုင်ငံသား တယောက်နဲ့ နိုင်ငံမဲ့ တယောက်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ —
တရုတ်အစိုးရ၏ ကွပ်မျက်ခြင်းခံရသူ စိုင်းနော်ခမ်း
တရုတ် အစိုးရက မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်း ကို သေဒဏ် စီရင်မည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်က မဲခေါင်မြစ်အတွင်း တရုတ်သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက်ကို သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ရွှေတြိဂံဒေသ မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် နော်ခမ်းနဲ့ အပေါင်းပါ သုံးယောက်ရဲ့ အယူခံကို တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင် (Kunming) တရားရုံးက ပလပ် ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီကနေ့ သောကြာနေ့မှာ သူတို့ကို သေဒဏ်စီရင်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ပြည်သူ့တရားရုံးက သူတို့လေးဦးကို ဆေးထိုးပြီး အဆုံးစီရင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ကူမင်ပြည်သူ့တရားရုံးက ပြောပါတယ်။နော်ခမ်း ဟာ တရုတ်၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား နဲ့ ဗီယက်နန်နိုင်ငံတွေ ကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းနေတဲ့ မဲခေါင်မြစ်တလျှောက် လှုပ်ရှားနေတဲ့ အကြီးဆုံး မူးယစ်မှောင်ခို ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ နော်ခမ်းနဲ့အတူ သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ သုံးယောက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက Hsang Kham၊ နိုင်ငံမဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ Yi Lai နဲ့ လာအိုနိုင်ငံက Zha Xika တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက မဲခေါင်မြစ်အတွင်း တရုတ်ကုန်တင်သဘောင်္ နှစ်စင်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက်ကို သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ကူမင် တရားရုံးမှာ နော်ခမ်းနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နော်ခမ်းနဲ့ အပေါင်းပါ သုံးယောက်ကို သေဒဏ်အပြစ်ပေးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အပြင် ကူမင်မြို့မှာရှိတဲ့ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ လာရောက်ကြည့်ရှု တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက် တရားရုံးက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ သေဒဏ်စီရင်ပြီးတဲ့အခါ အပြစ်ပေးခံရသူတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ သေတမ်းစာနဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေကို လွှဲပြောင်း ပေးအပ်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သေဒဏ် မစီရင်ခင်အချိန်အထိ သူတို့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပေးပြီး သူတို့ကို သေသေချာချာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ယူနန်ပြည်နယ် အကျဉ်းထောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Zhao Biao က ပြောပါတယ်။
“သူတို့လေးယောက်ကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့တွေ အတော်ကြီး တုန်လှုပ်ချောက်ခြားသွားကြတယ်။ သူတို့ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်လိုတဲ့အကြောင်း အကြီးအကျယ် ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ ခုချိန်မှာ သူတို့လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့ သီးသန့်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ သူတို့ကို ကျနော်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသလို ဥပဒေနဲ့အညီ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ပေးထားပါတယ်။” – လို့ ယူနန်ပြည်နယ် အကျဉ်းထောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြောသွားတာပါ။
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်နယ်အတွင်းမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် နော်ခမ်း ကို လာအိုအာဏာပိုင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဧပြီလအတွင်း ရွှေတြိဂံဒေသမှာပဲ ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လက်ထဲ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။ ဧပြီလအတွင်း သူ့ကိုမဖမ်းဆီးမိခင် ရက်ပိုင်းအလိုမှာ ထိုင်းအစိုးရ မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က သူ့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရင် ဆုငွေ ထိုင်းဘတ် ၂ သန်း ပေးမယ် လို့ ကြေညာခဲ့တာ ရှိသလို တရုတ်နိုင်ငံကလည်း နော်ခမ်းကို ဖမ်းဆီး သုတ်သင် နိုင်ဖို့ အတွက် မောင်းသူမပါတဲ့ အဝေးထိန်း ဒုံးယာဉ်သုံးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ နယ်မြေထဲအထိ တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းဖို့ စဉ်းစားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရွှေတြိဂံဒေသ အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ မူးယစ်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် နော်ခမ်းဟာ ဘိန်းဘုရင်ခွန်ဆာရဲ့ MTA ခေါ် မော်ထိုင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက် ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ဘိန်းဘုရင်ခွန်ဆာ လက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မှာ တာချီလိတ်မြို့နယ် ဟောင်လိတ် ပြည်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင် တယောက် ဖြစ်လာခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရောက် ဦးသိန်းစိန် ဖင်လန်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံ
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဖင်လန်ဝန်ကြီး Heidi Hautala
ဥရောပနိုင်ငံတွေကို ခရီးလှည့်လည်နေတဲ့ မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ လောလောဆယ် ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေပါတယ်။ Helsinki မြို့တော်ကို သောကြာနေ့က ရောက်ရှိလာ တဲ့ မြန်မာသမ္မတဟာ ဖင်လန် သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဖင်လန် နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယူရို ၆ သန်းခွဲထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့ ဖင်လန် သမ္မတ က ပြောကြားခဲ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်ရေးအတွက် ဖင်လန်နိုင်ငံက ကူညီသွားမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ၃ ရက်ကြာ ဖင်လန် ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေး ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအရ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင် ဖို့လို့ မြင်နိုင် တဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ထဲက ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံအဖြစ် ဖင်လန်နိုင်ငံကို သောကြာနေ့က ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Helsinki မြို့တော်ကို ရောက်တဲ့ ပထမနေ့မှာပဲ ဖင်လန်သမ္မတနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် သမ္မဟောင်းနဲ့ပါ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်း ဖင်လန် နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းက VOA ကို ခုလို ပြောပြပါတယ်။
“သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဖင်လန်သမ္မတ ဆော်လီ နီနစ္စတို (Sauli Niinisto) နဲ့ တွေ့ တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဦးသိန်းစိန်က ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဖင်လန်သမ္မတဟောင်း တယောက်ဖြစ်တဲ့ Martti Ahtisaari အာချေးငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ဝင်ရှင်းပေးတဲ့သမ္မတဟောင်းနဲ့ လည်း တွေ့တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး Heidi Hautala နဲ့လည်း တွေ့တယ်။ သူက ဗမာပြည် ရောက်ဖူးတယ်။”
သမ္မတနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖင်လန်က ရှေ့ ၂ နှစ် အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယူရိုငွေ ၆ သန်းခွဲနီးပါး ထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့ ဖင်လန် သမ္မတက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဧည့်သည်တော်ဂေဟာမှာ တွေ့တယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလည်း သူတို့လုပ်ပါတယ်။ ချစ်ကြည်ရေးစကားတွေတော့ ပြောကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ သမ္မတကနေပြီးတော့ ဗမာပြည်အတွက် ၆.၄ သန်းကို ၂၀၁၄ နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ကူညီဖို့အတွက် သူတို့ ကတိပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ထပ်ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ သမ္မတ အဓိကပြောတာကတော့ ဖင်လန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဗမာပြည်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ဖို့ သူတို့ကူညီချင်ပါတယ်တဲ့။ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲဖို့ သေသေချာချာ ခိုင်ခိုင်မာမာ စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ရှိဖို့ လိုပါတယ်-တဲ့။ ပြီးတော့ သူက မေးခွန်း တစ်ခု မေးတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ စတဲ့အချိန်မှာ လွှတ်တော်ထဲ မှာ နေရာယူထားတဲ့ တပ်က နေရာရထားတဲ့ ဟာတွေ အကုန်လုံးကို ဖြုတ်ချပေးဖို့ ရှိပါသလား-တဲ့။ အဲဒါ မေးတော့ ဦးသိန်းစိန် ဘာမှ မဖြေဘူး ခင်ဗျ။ အဲဒါတော့ ကျနော် တွေ့လိုက်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်က ဒီမှာပြောတာကတော့ ဗမာပြည်က ပြောင်းလဲလာပါပြီ-ပေါ့နော်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ပြောင်း လဲနေတာပေါ့။ အားနည်းချက်တွေရှိတယ်- သူ ဒါမျိုး ပြောတယ်ခင်ဗျ။ ပြီးတော့ဖင်လန်မှာ ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ဗမာပြည်ထဲမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပေါ့။ သူ ဒါမျိုးတွေပဲ ပြောတယ် ခင်ဗျ။”
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း EU ဥရောပသမဂ္ဂက လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ ကိစ္စကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆိုင်းငံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကိုလဲ EU နိုင်ငံတွေက ထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့ ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလည်း ဖင်လန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထောက်ပံ့ ကူညီမှုပေးမယ်လို့ ထပ်ပြီး ကတိပြုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ဒီထောက်ပံ့မှုတွေကို လိုအပ်သူတွေလက်ထဲ တကယ်ရောက်ရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြမယ်လို့ ကိုငြိမ်းချမ်းက ပြောပါတယ်။ Helsinki မြို့တော်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှေ့မှာ စနေနေ့ ဆန္ဒပြကြဖို့ စီစဉ်ရတဲ့အကြောင်းကို ခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“လောလောဆယ် ဗမာပြည်ထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ဒုက္ခ သုက္ခတွေကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဘာမှ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာမျိုး မရှိဘူးလို့ ကျနော်တို့က မြင်တယ်။ နောက် တစ်ချက်က ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့ နေတယ် ဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့က အခွန်ထမ်း ပြည် သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ အခွန်ကို ပြည်သူတွေလက်ထဲ မရောက်ဘဲနဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထဲကို ရောက်သွားရင် အလွဲသုံးစားဖြစ်သွားမှာကို ကျနော်တို့ တအား စိုးရိမ်တယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျနော်တို့က ဖင်လန် အစိုးရကိုလည်း သတိပေးချင်တယ်။ ဗမာပြည်သူတွေ ကိုလည်း ပြောချင်တယ်။ ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက်ကတော့ ဝိုင်းဝန်းကူညီချင်တယ်။ ကျနော်တို့လည်း သူများနိုင်ငံမှာနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ ဗမာပြည်သားဖြစ်တဲ့အတွက် သွေးကတော့ ဗမာသွေးပါပဲ ဆိုတာကို ပြောချင်တာ။ ဒီအချက်နှစ်ခုနဲ့ ကျနော်တို့က ဆန္ဒပြဖို့ စီစဉ်ရတာပါ။”
ဖင်လန် နိုင်ငံမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဝန်ကြီးတချို့ရောက်ရှိနေချိန်အတွင်းမှာ ဖင်လန်ရောက် မြန်မာ မိသားစုတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ စနေနေ့ကျရင် ဆိပ်ကမ်းတခုနဲ့ ဘူမိဗေဒ သုတေသနဌာနကို သွားရောက်လေ့လာကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်တော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အဖွဲ့ဟာ သြစတြီးယား၊ နိုင်ငံ Vienna မြို့တော်ကို ခရီးဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ သမ္မတရဲ့ ပထမဆုံး ဥရောပခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး နော်ဝေ၊ ဖင်လန်၊ သြစတြီးယား၊ အီတလီနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယမ် နိုင်ငံတွေကို လှည့်လည် သွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Why we are completely forgotten by world ,the main reason is merely we forgot our native place: Arakan, western Myanmar
Fundamentally, the earth has been designated with full of varieties of creatures having mixed-colored as dwelling at ease only for the super creature, human beings. Human beings deserved super dignity by birth naturally .The Creator Himself witnessed that the most good-looking creature on the earth surface is the only one: human being. Every human being both male and female is equal in the sight of God except the deeds. The main intention of creation human beings and jinns is to worship the God alone without any associates. According to the sacred teachings of glorious Quran we learnt that to let know the law to the man kinds particularly how to lead the life He, God sent the final Prophet Muhammed (PBUH) with final revelation Quran. There are two types of rights which are mandatory on us to fulfill strictly without any excuse for every individual: 1. rights of God, 2. rights of slave and two types of compulsory duty : 1. Individual compulsory duty which is to be performed by every individual ,2. Commune compulsory duty which is to be performed by the society. After our death physically, we have to respond spiritually about each rights and duties individually.
To perform above mentioned mandatory duties it is extremely essential to be educated both male and female individually ‘’Our beloved Prophet(pbuh) stated that it is compulsory for every individual both male and female to learn education and stressed to acquire knowledge and these are some of his wise sayings about wisdom: The ink of the scholar is more holy than the blood of the martyr.The value of true learned human kinds is superior than the illiterate ones.Go in quest of knowledge even unto China.Seek knowledge from the cradle to the grave.’’. And we also learnt that ‘’education is the backbone ofanation’’. Apparently, if we think and ponder about education it is as vital as water to lead the life with prosperity and stability .By the way, if we watch carefully throughout the Rohingya commune we are mostly educated of low syllabus and hardly few of higher syllabus around the whole Myanmar country because the regime itself strategically made us approached gradually to darkened world of illiterate to make us lively-dead during this 21 first century which is the era of sophisticated technology world Of comfort and luxury. ‘’The main purpose of why i expressed emphatically above with more illustrations about education is to be realized that the stability and prosperity ofanation depends upon the education of that nation.’’
Let’s consider thoroughly why we have been approached at least educated, statelessness and distressed situation eventually while the rest communes of respective races around the world are enjoying comfortably in this 21st century of technology era! During the dictatorship of General Ne Win, he passed strategic master planning with his chauvinist Burma armies how to permanently capture the state power and soon he focused which ethnic group could dominate earlier then finally he found that the utter terrible disaster to tackle against the martial law is the only one race , Rohingya who are the oldest indigenous race of western Myanamr near bay of Bengal because Rohingya intellectuals of respective fields played great roles both gentleman and ladies .Here are some names of Rohingya great persons of political field: Among the Rohingya commune initially , U Sultan Mahmood ,one of the Rohingya elected members appointed asacabinet minister of Prime Minister U Nu’s government, and in charge for the ministry of Education and Health. U Abdul Ghaffar and U Abul Bashar, elected members of Buthidaung became the Parliamentary Secretaries. Thereafter suddenly he imposed violently discriminatory operations. Among the operations, the most notorious and probably the best-documented operation, King Dragon operation affected mainly Rohingya which had driven out about 300000 Rohingyas in 1977-1978.But most of our people both literate and illiterate ones ignore to focus about the perpetual atrocities of Buddhist extremist gangs.
Due to the miscarriage of his previous strategies to deport the Rohingya commune entirely then he imposed 1982 citizenship law which isadiscriminatory law according to international law, only prescribed intentionally to erase Rohingya particularly from the national census and immediately cancelled both ethnicity and nationality of Rohingya. According to the double standard rules of late dictator General Ne Win, predecessor of the world worst dictator Senior general Than Shwe, he ruled the Union of Myanmar by double standard ruling systems in some of ethnic minority areas but particularly perpetrated inhumanely several crimes against Rohingya for perpetuation until genocide accomplishment. Shortly After 1988 uprising ,the military rulers set up several camps of strategic planning for military intelligence ( MI).later, General Khin Yunt was appointed as MI chief and initiated gradually killings, torturing, raping, arbitrary arrest, confiscation lands, imposed restrictions for movement, religious functions, higher education, marriage, earning money . During his period of MI chief, most of the high profile religious scholars, experienced distinguished teachers ,illustrious politicians, well-known doctors ,etc are directly arrested and missed but it is terribly tragedy no body among the arrestees are returned home until today .He also stimulated racism setting mindset into every Buddist persons so that anti-Islam propaganda could reach every houses of Buddhists for easily eradication to Rohingya Community.
By the way, i would like to introduce here the initiation of 2012 conflict in Arakan briefly: Politics isadirty game; accordingly the current ruling party consisting of mostly military MPs in Union of Mynmar is well trained to play dramatically the political roles instead of true democratic policies. Therefore the president, Then Sein,aformer military high rank officer proposed the head of RNDP Vet Aye Maung how to strategically postpone the gradual ongoing democracy process throughout Rohingya populous area,Arakan mainly Buthidaung and Maung daw Tsps. The initiation of the conflict: On the evening of 28 May,agroup of men robbed, raped and murdered an ethnic Rakhine woman, Ma Thida Htwe, near the Kyaut Ne Maw village. The locals claimed the culprits to have been Rohingya Muslims. The police arrested three suspects and sent them to Yanbyey Tsp jail. On the 3rd Juneamob attackedabus in Taungup, mistakenly believing those Musilms were responsible for the murder. Those ten Burma Muslims were killed instantly in the spot who are beaten by more than 300 Rakhine extremists. But it wasadrama how to initiate conflict between Rakhine Buddhists and Rohingya Muslims. On the Friday of june 8,some Muslims from Maung Daw Tsp gathered after Juma(akind of congregational prayer of muslim on Friday) to pray for those ten Muslims who are killed brutally. Since that time conflict was stirred severely and propagated so earlier around the whole Arakan territory but it is deplorable that the conflict was sponsored from government higher officials directly under the Supervision of President Thein sein, who proposed the UNHCR chief Guterres to deport the Rohingya commune entirely into third country.the source: http://www.dvb.no/news/un-rejects-thein-sein%E2%80%99s-potential-rohingya-plan/22893
The deliberately happened conflict was created politically while the democratic reform process gradually going forward is only for reiteration of perpetration against Rohingya in june 2012. Imposing fresh several hidden strategies increasingly since June 2012 is only to accomplish the rest procedures for genocide against Rohingya which was postponed unfortunately due to the 2010 poll by the predecessor of president thein sein, the former dictator currently retired. It is regrettable in reality that both the Myanmarese brutal ruling chief President Thein Sein and the democracy champion of Myanmar, the Noble Peace Prize Laureate DASSK dramatically asserted that the conflict wasacommunal violence where even the armed forces so called security forces shot directly targeting Rohingya collaborating with Rakhine extremists.
Apparently, since several decades Rohingya commune is coming across deprived of birth rights and oppressed repressively from all sides even including religion by depraved minded ignorant Buddhist monks whose mentor is Wirathu backed by political institutions . It is horrific that the sisterhood community Rakhine Buddhist by the convincing of vet. Dr Aye Maung ,one of the mastermind of Rohingya genocide, who recently proposed in the parliament to segregate Rohingya as slaves of Rakhine .They are currently extremists who threaten violently penetrating Rohingya populous areas to flee uncertain destinations closing both eyes .it is deplorable that the security forces including all kinds of armed forces and government officials are looting Rohingya belonged properties, committing rape perpetually to immature girls and elder women dragging out from houses to concerned official houses particularly Nasaka( Boder Immigration ) camps, arbitrary arrest without any alleged and torture to death using many inhumane strategic finally release bribingagreat deal of money to those who can afford otherwise detained till dead and buried in uncommon places, blocked access of food distribution, banned proper medical treatment to any Rohingya ,restricted to earn daily need goods, and sponsored from Nasaka to send abroad many rohingya youths and virgins collaborating with Rakhine extremists Party ALP who recently threw approximately more than one thousand Rohingya male n raped many women detaining pregnant women in the sea.
Another significant point for us to be noticed: once we apply as asylum seeker in foreign countries then we have been imprisoned of handcuffing and granted temporary shelter under guarantee mostly but in turn of the rest communes all over the world that system is totally difference. They are warmly welcome and granted as asylum seeker with higher security comfortably.
‘’ Hereby i recall some priceless sayings relevant to peace and justice topics: paradise lies under the shade of sword. If you wish for peace, prepare for war.nobody can give your freedom,justice or equality or anything but if you areaman,take it. Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery.’’
Dear valued Rohingya compatriots it is too delayed for us to gladly approach unconditionally toward field of justice to achieve our deprived rights to struggle against the perpetually going ahead brutal regime of Myanmar who are being perpetrating rapidly several crimes even eventually against our Religion Islam . Currently our mosques and religious schools are locked up by officials and banned congregational prayer which is mandatory on us five timesaday. we challenge strongly that we never insult nor force to any Buddhist to accept Islam .The glorious Quran witnessed that there is no compulsion in religion 2:256. This kind of violation against religion is exceedingly perpetration so there is no more time to await and watch criminally.
As i mentioned in the first paragraph about the rights and duties which are mandatory on us ,we have to perform dutifully to escape from severe torment of hereafter therefore to save the remained Rohingya compatriots inside Arakan is the most inevitable duty for us and it is commune compulsory duty but in this our current statelessness situation in 2013 , that duty turned itself for us as individual compulsory duty which is to be performed by every Rohingya individual including baby of cradle and widowed women until we regain our rights. For instance, daily five times prayer is individual compulsory duty which is to be performed one self otherwise it is unlawful.
Furthermore, i would like to express woefully here some controversial points about us: we are strong to easily condemn to our leaders but i think it isagreat mistake because we have to issue interrogation ourselves as what i have done for the sake of my commune?. Thus, our respective leaders are more noble than me because i could not yet do anything much or less as those who are already have done something for the sake of Rohingya commune. It is more better to refrain from backbiting and condemnation blindly about the activities of the leaders.
In conclusion, When we flee abroad due to threats and oppression then soon we forgot the native place , Arakan, and majority of us stay carefree mostly ignoring to go back there again.since 1962 we expected and begged globally to help us and the voice also about our chronic Rohingya plight crisis is heard as far as it concerned around the world but it is miserable currently the atrocities are being happened more than before and, we are completely forgotten by the world also . The Almighty, Himself revealed us through Quran to struggle to save those who are remained suffering oppression from the enemies: what is wrong with you that you fight not in the cause of Allah ,and for those weak,ill-treated,and oppressed among men,women,and children, whose cry is:’’Our Lord! Rescue us from this town whose people are oppressors;and raise for us from You one who will protect,and raise for us from You one who will help.(4:75)’’ Accordingly, I would like to emphasize to my valued Rohingya compatriots to bear in the mind patriotism to protect our motherland as this patriotic saying: ‘’ love of motherland (patriotism) is an integral part of faith.’’ By the will of God, I’m hopeful that if we stand and struggle with integrity corporately we would certainly regain our rights because of which we are currently statelessness globally .It is too late so let’s wake up and make concentrated efforts which would yield our freedom only.
Slogan to struggle for the sake of Rohingya: protect the Motherland,protect the People and let’s struggle corporately with integrity,wake up wake up dear valued Rohingya compatriots.
Article writer: Rafiq Shah @ Ibrahim Shah isaRohingya youth activist andafellow research in Sufism based on Maizbhandar philosophy.
This entry was posted on February 28, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment